ဆရာမလေး မွတျနိုး – My Blog
ဆရာမ မမွတျနိူးသညျအသကျ(၂၆) နှဈရှိပွီဖွဈပွီး အပြို တဈယောကျဖွဈသသညျ အသားဖွူဖွူကိုယျလုံးတောငျ့တောငျ့နှငျ့ ခြောမောလှပသူဖွဈပွီး အလုပျကလညျးကြောငျးဆရာမဆိုတော့ အိနွေ်ဒသိက်ခာ ကလညျးကွီးသညျ။ ဝတစြားဆငယြငပြုံကလ ညြး မကလကျပဲခောတျနှငျ့အမှီလိုကျသညျ။ မမြတ်နိူး တဈယောကျစာဖတျနစေဉျမှာပငျ သူမ၏အနီးသို.လူတဈယောကျဗွုံးကနဲ ရောကျလာသဖွငျ့ အထိတျတလနျ.ဖွငျ့မော့ကွညျ့လိုကျသညျ။ထိုသို.မော့အကွညျ့မှာပငျထိုသူကလြှငျမွနျစှာဖွငျ့ သူမ၏ပါးစပျကို ပိတျကာကုတငျပျေါသို.ပှေ.တငျလိုကျလသေညျ။ မွတျနိူး ကိုယျလုံးလေးကုတငျပျေါသို.ရောကျသှားသောအခါ ထိုသူကလညျး
ဒူးထောကျကာတကျလိုကျသဖွငျ့ မွတျနိူး ၏ပါးစပျကိုပိတျထားသော လက်ကလျော့ရဲရဲ ဖွဈသှားခိုကျ မွတျနိူး ကလညျး အတငျး ရုနျးကနျလိုကျသဖွငျ့ သူမ၏ပါးစပျမှာ ထိုသူ.လကျမှလှတျသှားလသေညျ။ ဘယျ….ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ…မောငျစိနျမွငျ့…. မငျးဟာ တျောတျောဆိုးတာပဲ…. မွတျနိူး ကမောဟိုကျသံဖွငျ့ပွောလိုကျသညျ။ စိနျမွငျ့ ဆိုသူက မွတျနိုးတို့အိမျနားမှ တက်ကသိုလျနောကျဆုံး နှဈကြောငျးသားတဈဦးဖွဈသညျ။ မွတျနိုး ကြောငျးသှား^ကြောငျးပွနျ စိနျမွငျ့ခိုးခိုးကွညျ့ပွီး မခငျြ့မရဲဖွဈနရေတာ ကွာပွီ။ ဒါကို မွတျနိုးလဲ သတိထားမိသညျ။ ခုတော့ ရုတျတရကျကွီး သူမအိပျခနျးထဲ ပိုငျစိုးပိုငျနငျးဝငျရောကျလာပါပွီကော။
စိနျမွငျ့က ဘာမှပွနျမပွောပဲ မွတျနိူး ၏ကိုယ်လုံး အိအိထှေးထှေးကို ပွနျပှေ.ပိုကျလိုကျရငျး သူမ၏ပါးပွငျနှဈဖကျ ကို ဘယျပွနျညာပွနျ နမျးနမေိသညျ။ ခဈြလှနျးလို.ကွံမိတာပါ…မမနိူး ရယျ….. တှေ.ထိလိုကျရသော အတွေ.ကွောငျ့စိတျမြားပို ထ sကလာရသညျ။ မလိုခငျြဘူး…မငျး ငါ့အခနျးထဲကအခုခကျြခငျြးထှကျသှားပါ..ထွက်ကွာ… တကယျဘဲ ရကျစကျတော့မှာလား…မ မနိူး ရယျ…..ကြှနျတေျာ့မှာတော့ခဈြလိုကျရတာ၊ ကြှနျတေျာ့ကိုပွနျခဈြပါလား မမ ရယျ နျော… မငျး ပွောလကေဲလပေါလား…မခဈြနိူ ငျဘူး… လှတျ ငါ့ကိုလှတျ…… မွတျနိူး သညျရုနျးကနျရငျး အားယူနသေလို စိနျမွငျ့ ကလညျး သူ၏ထှားကွိုငျးသော ကိုယျလုံးဖွငျ့ သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို အတငျးဖိကာဖကျထားသညျ။
စိနျမွငျ့ သညျကွောကျလှနျးသဖွငျ့ တဆတျဆတျတုနျနသေော မွတျနိူး ၏နှုတျခမျးနှဈလှာကို သူ၏ နှုတျခမျးထူထူကွီးဖွငျ့ အတငျးဖိ ကပျကာ စုပျနမျးလိုကျသညျ။ ဖလူး…ဖူး…အူး အူး မွတျနိူး အတငျးပငျရု နျကနျပါသျောလညျး မရတော့ပါ၊ စိနျမွငျ့ နှုတျခမျးစုပျအား ထကျ အဆပေါငျးမြားစှာပိုအားပွငျးသော နှုတျခမျးခွငျးအထိတှငျပြံ.နှံ.ကူး စကျလာသော အဖိုဓါတျ၏ ဆှဲငငျအားကွောငျ့ မွတျနိူး တဈယောကျ လှတျထှကျသှားအောငျမရုနျးနိူငျဖွဈရခပြွေီ။ မွတျနိူး သညျ ယခုအသကျအရှယျထိ မညျသညျ့ယောကငြ်္ားတဈဦး တဈယောကျ နှငျ့ ယခုကဲ့သို. ထိတှေ.ခဲ.ဖူးခွငျးမရှိသော အစိမျးသကျသကျ အရိုငျးသကျသကျ ဖွဈသဖွငျ့ တဇှတျထိုးနိူငျသော စိနျ မွငျ့ ၏အပွုအမူမြားကွောငျ့ သူမ ၏တဈကိုယျလုံးမှာလညျး တခဏအတှငျးမှာပငျ ဖိနျးတိနျးတိနျး ရှိနျးတိနျးတိနျးဖွဈလာလေ သညျ။ သူမ ၏ နှုတျခမျးပါးလေးအစုံကို ငုံခဲကာထားသော စိနျမွငျ့ ဆိုသောကောငျလေးသညျလညျး ခသေူမဟုတျခြေ။
သူမ ၏ နှုတျခမျးအစုံကို ငုံခဲကာစုပျနမျးခံနရေသဖွငျ့ မခြိမဆနျ့ ခံစားနရေသော မွတျနိုး ၏ကြောပွငျလေးကို သူ၏လက်တစ်ဖက်က လြှော တိုကျပှတျပေးနရေငျးက မွတျနိူး ဝတထြားသော ဘလောကျဈ အကငြ်္ီလေး၏ နောကျဖကျတှငျရှိသော နှိပျစကေ့ယျြသီးမြားကို တှနျးဖွုတျခနြရော မကွာမှီတှငျပငျ မွတျနိူး ၏ကြောပွငျ ပွနျ.ပွနျ.ဝငြးဝငြးလေးမှ အပွောငျသားဖွဈသှားရလသေညျ။ ယခုအခြိနျ ထိ သူမ ၏ကြောပွငျတဈခုလုံး ဗလာကငျြး သှားရသညျကို မွတျနိူး သတိထားမိပုံမရသေး။ သို.ရာတှငျ သူမ၏ ကြောပွငျလေးပျေါ သို. စိနျမွငျ့ ၏လက်ဖဝါးက ရှရှလေး ပှတျသပျပေးလိုကျသောအခါတှငျတော့ မွတျနိူး တတှနျ.တှနျ.ဖွဈကာသှားလသေညျ။ မွတျနိူး ၏ နှာခေါငျးဝမှ ထှကျလာသော အသကျရှုသံမြားကား ပွငျးထနျနသေညျ။ ဝငလြေ ထှကျလေ များက တရှုးရှုးဖွငျ့ စိနျမွငျ့ ၏မကျြနှာ ကို လာရိုကျခတျနသေညျ။
စိနျမွငျ့၏လကျက သူမ ၏ကြောပွငျလေးကို အသားခငျြးထိကာ တရှရှဖွငျ့ပှတျသပျနပွေီးမှ ဖေါငျးအိ သော သူမ ၏ တငျသားကွီးတဈဖကျဆီသို.လမျးကွောငျးပွောငျးသှားကာ တငျသားကွီးနှဈလုံးကို တဖှဖှဆုပျနယျကာပေးနသေညျ။ ကုတငျပျေါတှငျ တဈဦးနှငျ့တဈဦးမကျြနှာခငျြးဆိုငျ အနအေထားဖွငျ့ စောငျးလကျြသားဖွဈနကွေရာမှ မွတျနိူး ၏ခွနှေဈခြောငျး အနကျ အပျေါဖကျသို.ရောကနသေော ဒူးဆဈလေးက ခပျကှေးကှေးလေးဖွဈသှားသဖွငျ့ စိနျမွငျ့ ၏ပေါငျဖြားဆီသို.တငျကာလာ သညျ။ သညျအခါတှငျတော့ သူမ ၏ဖငျသားကွီး နှဈခွမျးမှ ခပျဟဟ လေးဖွဈသှားသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ ထိုကှဲဟသှားသော ဖငျသား နှဈခွမျး၏ အသားနုနု နရောမြားကို ထမီပျေါမှပငျ ဖိပွီးပှတျပေးလသေညျ။
မွတျနိူး သညျ ညအိပျယာဝငျခါနီးပွီဖွဈသဖွငျ့ အတှငျးမှ ဘာအခုအခံ မှ ဝတမြထားသောကှောငြ့ မွတျနိူး ၏အသားစိုငျစိုငျ နုနုမြားသညျ စိနျမွငျ့ ၏လကျဖဝါးဒဏျ ကို ခံလိုကျရလေ သညျ။ မွတျနိူး သညျရငျထဲတှငျ ဖွိုးဖွိုးဖငျြးဖငျြး ခံစားလိုကျရသဖွငျ့ သူမ ၏ခပျကှေးကှေးလုပျထားပွီး စိနျမွငျ့ ၏ပေါငျပျေါတှငျ တငျထားသော ဒူးဆဈသညျ ရှေ.သို.ပိုတိုးသှားပွီး သူမ ၏ပေါငျတဈဖကျက စိနျမွငျ့ ၏ပေါငျပျေါတှငျ ခွမိရကျသား ဖွဈသှားလေ သညျ။ စိနျမွငျ့ သညျမွတျနိူး ၏နှုတျခမျးနှဈလှာကို စုပျနမျးနရောမှ sပတျ ကနဲမွညျအောငျ
ပွနျခှါလိုကျသညျ။ မွတျနိူး သညျ မှိတျထားသော မျက်လုံးတစ်စုံကို ပွနျမဖှငျ့နိူငျသေးပဲ ရငျအစုံမှာ နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြဖွငျ့ မောဟိုကျနေ ရှာသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ အခြိနျဆိုငျးမနတေော့ပဲ မွတျနိူး ၏လညျတိုငျဖွူဖွူလေးရှိ ဖေါငျးကာထနသေောသှေးကွောမကွီးရှိရာ သို. သူ၏နှုတျခမျးအား ဖွတျ ကနဲဖိကပ်ကာ တအားပငျ စုပျနမျးလိုကျလသေညျ။ အငျ့…အို……အငျး….ကြှတျ ကြှတျ……. မွတျနိူး ၏မေးဖြားလေး မှာ မော့တကျသှားပွီး သူမ ၏မကျြနှာလေးမှာ ရှုံ.မဲ့ကာသှားလသေညျ။ မွတျနိူး ၏ နှုတျခမျးပါးလေးမြားမှာ အပြိုစငျဖွဈပွီး အတွေ.အကွုံ မရှိသောကွောငျ့ထငျ…တဆတျဆတျ တုနျယငျကာနရှောသညျ။ နောကျဆုံးမတော့ မွတျနိူး အိ နွေ်ဒမဆညျနိူငျတော့ပါ၊
အရှကျသိက်ခာကွီးသော မွတျနိူး တဈယောကျ သူမ ၏လက်တစ်ဖက်က စိနျမွငျ့ ၏ လကျမောငျးကို ဆုပျကိုငျမိ တော့သညျ။ပွီးတော့ စိနျမွငျ့ ၏ပေါငျပျေါတှငျ ခှထားသော သူမ ၏ပေါငျတံ သညျ စိနျမွငျ့ ၏ပေါငျကို အတငျးပငျဖိကပျပေး နသေညျ။ စိနျမွငျ့ကတော့ ဖွဈပျေါလာသော အခွအေနကေို အကောငျးဆုံးအသုံးခရြနျ စိတျပိုငျးဖွတျလိုကျလတေော့သညျ။ စိနျ မွငျ့ ၏လကျသညျ မွတျနိူး ၏ ကိုယျနှငျ့ အိပျယာကွားမှ ထိုးသှငျးကာ မွတျနိူး ၏ဘျောလီ ကျယျသီးများကို ခဲရာခဲဆဈရအောငျ ဖွုတျပေးနသေညျ။သူ၏ နှုတျခမျးထူထူကွီးမြားမှာကား မွတျနိူး ၏လညျတိုငျလေးကို ငုံခဲလကျြပငျရှိသေးသညျ။ ဘျောလီ ကယျြ သီးမြားကိုဖွုတျပွီးသှားသညျ့အခါတှငျ စိနျမွငျ့သညျ သူ၏လကျမြားဖွငျ့ တငျးကားအယျနသေော မွတျနိူး ၏ဖငျသာကွီးမြားကို စိတျကွိုကျဆုပျနယျသုံးသပျပေး လသေညျ။
ထို.နောကျ သူမ၏ ဖငျသားနှဈခွမျးကိုလြောတိုကျပေးနသေော စိနျမွငျ့ ၏လကျသညျ မွတျနိူး ၏ပေါငျရငျးနှဈလုံးကွားရှေ.ဖကျ သို. တိုးဝငျကာ ထမီပိတ်စ ပါးပါးလေးပျေါမှ နပွေီး မုနျ့ပေါငျးဖိုမှ ချခါစကဲသို. ပူနှေးကာဖေါငျးအိနူးညံ့ လသေော မွတျနိူး ၏အဖုတ် ကို နှိုကျလတေော့သညျ။ ထိုအခါတှငျ မွတျနိူး ၏ကငျြသောခါးသေးသေးလေးသညျ ဆတျကနဲကော့ကာတကျသှားရာ စိနျမွငျ့ ၏ပုဆိုးတှငျးမှ မာတောငျနပေူနှေးနသေော လီးကွီး၏ထိပျက သူမ ၏ဆီးစပ်ကို ထောကျလိုကျမိသညျ။ သူမ ၏ဆီးစပ်ကလေး တငျး ကနဲဖွဈသှားသဖွငျ့ တဖနျပွနျကာ သူမ၏ဖငျသားမြားကိုနောကျသို.ဆုတျလိုကျလသေညျ။ ထိုအခါတှငျ စိနျမွငျ့ သညျ အဖုတျ နှိုကျ သောသူ၏လကျမြားကို မွတျနိူး ၏ဖငျသားအကှဲကွားမြားမှတဖနျ သူမ ၏ စအိုဝ ကို ထမီပျေါမှနပွေီးကလိပေးပွနျသညျ။ မွတျနိူး တဈယောကျ ရှေ.တို.လညျး တံပိုး နောကျဆုတျလညျး ဝငရြိုး ကဲ့သို.ဖွဈနရေပွီး အနခေကျနရေသညျ။
ဘဝတဈသကျတာတှငျ တဈကွိမျတဈခါမှမခံစားဖူးသေးသညျ့ အတွေ.အထိမြားကွောငျ့ ဆရာမ မမြတ်နိူး ခမျာ စိနျမွငျ့ ၏ အနမျး အစုတျ၊ အပှတျအသပျ၊ အခြော့အမွူ မြားကွားတှငျ တဈကိုယျလုံးပြော့ခှကောသှားခပြွေီ။ မကွာလိုကျပါ။ စိနျမွငျ့ ၏လကျမောငျးကို ခပျဖှဖှဆုပျကိုငျထားသော သူမ၏လကျသညျ စိနျမွငျ့ ၏ကိုယျလုံးအားတအားကွုံးကာဖကျလိုကျပွီး နှုတျမှ လညျး တအငျးအငျး ဖွငျ့ တီးတိုးညီးညူနလေသေညျ။ ထိုကဲ့သို.မွတျနိူး တဈယောကျစိတျမြားစိနျမွငျ့ ကတော့ မွတျနိူး ကို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ကာနသေညျ။ သူမ သညျ မျက်လုံးများကို မဖှငျ့နိူငျရှာသေးပဲ အသက်ကို မွှငျးမွှငျးလေးရှုကာ ရငျဘတျမြားကား နိမျ့တုံ မွငျ့တုံ ဖွဈနလေသေညျ။
မမနိုး…ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြခှငျ့ပွုပါတော့နျော….. စိနျမွငျ့ ၏မြှျောလငျ့ခကျြအပွညျ့ပါသော ရမ်မကျခိုးမြားတကျနသေညျ့ မျက်လုံးများ နှငျ့ကွညျ့ပွီး မွတျနိူး အားခှငျ့ပနျလိုကျသညျ။ ချစ်လို့… ရှိယငျလညျး…ရိုးရိုး…ခဈြပါလား…ခု မငျးဟာက…..ဟငျး မပွသေေးသညျ့ အမောသံလေးဖွငျ့ မွတျနိူး ကပွနျပွောလိုကျလသေညျ။ သူမ သညျ ထိုစကားကို ပွောသာပွောရသျောညလညျး စိတျအတှငျးမှ လှိုငျးတံပိုးပမာ တလှိမျ့လှိမျ့ တကျကာလာနသေော အာသာရမ်မကျစိတျမြားကို ဖဖြွေောကျနိူငျခွငျးငှာ မစှမျးဆောငျနိူငျသေး။
လူကွီးတှေ နိူးကုနျရငျ မကောငျးပါဘူးကှယျ…ပွနျပါတော့ မောငျလေးရယျ..မငျးအခဈြကို နောကျမှလကျခံပါရစနေျော….. ဟာ…မ မနိူး ကလညျး…အချစ်ဆိုတာ အခြိနျဆှဲလို. ရတာမှမဟုတ်တာ…. ပွောပွောဆိုဆိုဖွငျ့ စိနျမွငျ့ သညျရှသေို့တိုးကာ မွတျနိူး ၏ကိုယျလုံး လေးကိုဖကျလိုကျလသေညျ။ မလုပျပါနဲ. မောငျလေးရယျ…မမ တောငျးပနျပါတယျ…နျော… မမနိူး ကို လှတျလှတျလပျလပျ မခဈြ ရရငျ ကြှနျတျောမပွနျဘူး… ထိုသို့ပွောရငျး စိနျမွငျ့ သညျ မွတျနိူး၏ဘလောကျဈ အကငြ်္ီကို လကျဖွငျ့ဆှဲကိုငျကာ လညျပငျးနား ရောကျသညျအထိ ဆှဲလှနျလိုကျလသေညျ။
ဘလောကျဈ အကငြ်္ီသညျ ကြောဖကျမှကယျြသီးအားလုံးပွုတျနပွေီဖွဈသဖွငျ့ အလှယျတကူလနျတကျသှားပွီး မို.ဖေါငျးနသေော ဘျောလီ အကငြ်္ီဖှေးဖှေးကိုမွငျလိုကျရလသေညျ။ လှုပျရှားရုနျးကနျခွငျး မပွုဘဲ မွတျနိူး က အို..အို..မလုပျပါနဲ့ဆိုတာ ကှယျ…မငျးကလညျး…. သူမ စကားမဆုံးမှီမှာပငျ စိနျမွငျ့ က မွတျနိူး ၏ ဘျောလီအကငြ်္ီကို အပျေါလှနျတငျလိုကျရာ သူမ ၏ဘျောလီ သညျ နောကျဖကျမှကယျြသီး အားလုံးကို ဖွုတျထားပွီးပွီ ဖွဈသညျ့အလြောကျ လကျသီးဆုတျခနျ့ရှိသော မွတျနိူး ၏ ရငျသားနှဈဖကျမှာ ခကျြခငျြး ဆိုသလိုပငျ စိနျမွငျ့ ၏ မကျြနှာ ကသူမ၏ ရငျသားမြားဆီသို.ရောကျသှားပွီး ခြှနျနသေော စိနျမွငျ့ ၏ နှာခေါငျးက ရငျသားနှဈမှာကွားသို့ တိုးဝငျ ဖိကပျကာနမျးလသေညျ။
စိနျမွငျ့ သညျ ခပျကွာကွာလေး ဖိကပျကာနမျးလိုကျသောအခါ ကလယျကလယျ ဖွဈနသေော သူမ၏မျက်လုံးများ သညျ လေးလံစှာ ဖွငျ့ မှေးစငျးကာကသြှားလသေညျ။သှယျပြောငျးသော သူမ၏လကျတဈဖကျသညျ ယခုဆိုလြှငျ စိနျမွငျ့ ၏လညျဂုတျကိုပွနျလညျ ကာသိုငျးဖကျပေး နမေိတော့သညျ။ ထိုအခါတှငျမှ စိနျမွငျ့ ကသူ၏ နှာခေါငျး ကိုသူမ၏ နို့နှဈလုံးကွားမှ အနညျးငယျကွှလိုကျ သညျ။ အို…အို..ဟငျး ခံစားနရေသော အရသာ ပွတျတောကျသှားသဖွငျ့ မွတျနိုးထံမှ အလိုမကသြံလေးထှကျလာရ၏။ ပွီးတော့မှ စိနျမွငျ့ က သူ၏မကျြနှာကို နညျးနညျးစောငျးကာ မွတျနိုး၏ နို့သီးခေါငျးလေးတဖကျကို လြှာနှငျ့ယကျလိုကျလသေညျ။ အမေ့… အငျး…..အို….ဟာ… မွတျနိူး တဈကိုယျလုံးထှနျ့ထှနျ့လူးသှားရငျး သူမ၏ နောကျလကျတဈဖကျဖွငျ့ စိနျမွငျ့ ၏ကြောပွငျကို သိုငျး ဖကျလိုကျမိတော့သညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ တဈဖကျမှ နို့သီးကိုယကျပွီးသောအခါ အခွားနို့အုံမှ နို့သီးကိုနှုတျခမျးဖွငျ့ ငုံကာစုပျ ပေးလိုကျဖွငျ့ အလုပျရှုပျနလေသေညျ။
အို…ဟငျး…အ….ကြှတျကြှတျ…. မောငျ…မောငျ….လေး.. ဟငျ့…. မွတျနိူး ထိုကဲ့သို. အသံမြားထှကျလာသညျ့အပွငျ သူမ၏ကြော ပွငျသညျ အိပျယာပျေါမှ ကော့တကျလာသဖွငျ့ စိနျမွငျ့၏ ပါးစပျတှငျးသို.ဖိကပျပေးလိုကျသလိုဖွဈသှားလသေညျ။စိနျမွငျ့ကား အားပါးတရစို့ပေးနလေပွေီ၊ စိနျမွငျ့ စို့ပေးလေ မွတျနိူး ပေါငျလုံးကွီး နှဈလုံးမှာတဖွညျးဖွညျးပိုကားလေ ဖွဈလာသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ ပွလြေော့နပွေီဖွဈသော ထဘီကို မွတျနိူး ၏ခါးမှ အသာဆွဲကာ ခြှတျလိုကျသောအခါ ထဘီသညျ သူမ၏ဒူးဆဈနား လောကျသို့ရောကျသှားလသေညျ။
အိနွေ်ဒရှငျဆရာမ၏ အဖုတျလေးကိုကွညျ့ခငျြလှပွီဖွဈသျောလညျး နို့စို့ပေးနရေသောကွောငျ့ စိနျမွငျ့ သညျမကွညျ့အားသေး ခြေ။ ထို့ကွောငျ့ စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လကျတဈဖကျဖွငျ့ မွတျနိူး ၏ ပူနှေးဖေါငျး မွတျနိူး သညျတဈခါဘူးမှ ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျနှငျ့ ထိ တှေ.ခဲ့ဖူခွငျး မရှိပဲ၊ အခုမှ နဖူးတှေ. ဒူးတှေ. ထိတှေ.လိုကျရသဖွငျ့ သူမ ၏ကာမစိတျမြားမှာ ဘယျလိုမှထိနျးမနိူငျတော့ပဲ ဖွဈခငျြ ရာဖွဈနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ အတွေ.အကွုံ ရှိသငျ့သလောကျရှိနသေော စိနျမွငျ့ ကတော့ မွတျနိူး မှာ နှာထနျသော မိနျးမစားထဲ တှငျပါကွောငျး သတိပွုမိလိုကျသညျ။
စိနျမွငျ့၏လကျဖဝါးက မွတျနိူး၏စောကျဖုတျဖေါငျးဖေါငျးကွီးကိုအုပျပွီးကိုငျ ကာ ဖှဖှလေးဆုပျလိုကျညှဈလိုကျလုပျပေးနသေညျ။ မောငျ…လေး…ဟငျ့ ခုခြိနျထိ စိနျမွငျ့က မွတျနိူး ၏ နို့တှကေို အလှတျမပေးသေးဘဲ စိမျပွနေပွစေို့လကျြရှိသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ ထိ တှကေို့ငျရသညျမှာ အလှနျအရသာရှိလှသော မွတျနိူး ၏စောကျပတျကွီးကိုဆကျကာပှတျသပျ ပေးနလေသေညျ။ ပွီးတော့ စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကို ဖွဖွလေး တရှရှ ပှတျသပျပေးနပွေီး သူ၏လကျညှိုးကို သူမ၏ အခေါငျးဝသို့ လကျတဈဆဈခနျ့ ထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ ထို့နောကျ သူ၏လကျညှိုးကို စောကျပတျဝတှငျ ညငျညငျသာသာလေး လှညျ့ပတျမှပေေးနသေညျ။ ထို့ပွငျ လညျး သူမ၏ နို့ကို ဖိကာစို့နပွေီး လြှာဖွငျ့ ယကျပေးနလေသေညျ။
အ…ကြှတျကြှတျ…ဟငျ့… အို…မောငျလေးရယျ.. မမ ကို အသသေတျနတောလား…ဟငျ ထိုသို့ မွတျနိူး ၏နှာတှနျသံမြားကို ကွားလိုကျသောအခါ စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို မွတျနိူး ၏ ကိုယျပျေါမှ ကွှကာထထိုငျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ မွတျနိူး၏ ဒူးဆဈပျေါမှ ထမီကိုခြှတျလိုကျကာ တဈဆကျတညျးဆိုသလိုပငျ သူ၏ အဝတျအစားမြားကိုလညျး ခြှတျလိုကျလသေညျ။ စိနျမွငျ့ က သူမ၏နို့ကွီးနှဈလုံးကိုပါ ခပျတငျးတငျး ဆုပျကိုငျခမြှေနေ သဖွငျ့ သူမမှာ တစ်ကိုယ်လုံး ထိုးထိုးထှနျ့ထှနျ့ဖွဈလာပွီး ဖငျသားကွီးနှဈလုံးမှာလညျး လှုပျလှုပျရှရှဖွဈလာရလသေညျ။ မောငျ လေး…မမ ကို နှိပျစကျနတောလားကှယျ… ခဈြပါရစတေော့နျော…မမ ဒီလိုအခြိနျရောကျနမှေတော့ မထူးတော့ပါဘူး…မငျးသဘော အတိုငျးပါပဲကှယျ…
စိနျမွငျ့ လညျးအကွိုကျတှသှေ့ားပွီး သူမ၏ပေါငျနှဈလုံးကို ထပျမံကဆှဲကားလိုကျပွီး အရညျအရှဲသားနှငျ့ မွ တျနိူး ၏အာနသေော အခေါငျးနီနီရဲရဲအတှငျးသို. သူ၏လီးကွီးကိုတအားဆောငျ့လိုကျရာ အမလေး…ကြှတျကြှတျကြှတျ…နာလိုက် တာ မောငျလေး ရယျ… တဈခါမှ အလိုးမခံဘူးသော မွတျနိူး သူမ၏စောကျခေါငျးအတှငျးသို့ စိနျမွငျ့ ၏ လီးတနျကွီးက မညှာမ တာ ဝငသြှားဖှငြ့ အျောလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ စိနျမွငျ့ ကတော့ သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို ကုနျးကာစို့ပေးနဆေဲ။ မွတျနိူး သညျ သူမ၏လညျပငျးနားထိတငျကာလနျနသေော သူမ၏ ဘလောကျဈအကငြ်္ီနှငျ့ ဘျောလီ တို့ကိုအပွီးတိုငျဆှဲကာ ခြှတျလိုကျလေ သညျ။ စိနျမွငျ့သညျ အတနျကွာအောငျ နို့စို့ပေးလိုကျသောအခါ မွတျနိူး သညျ သိသိသာသာပငျ ခါးကော့ကာတကျလာပွီး စိနျမွငျ့ ၏ ကြောပွငျအားပှတျသပျပေးနသေညျ။
မမနိူး.. ဘာလဲ ဟငျ… မောငျလေး… ကြှနျတျော စိတျရှိသလောကျ ခဈြပါရစလေား….. ခဈြ…ခဈြ… မငျးကွိုကျသလိုခဈြစမျး… မွ တျနိူး သညျ စိတျတှအေတျောထလာပွီဖွဈသဖွငျ့ သူမ၏ဆန်ဒကို ဖှငျ့ထုတျလိုကျသညျတှငျ စိနျမွငျ့ ကလညျး သူမ၏ ဂြိုငျးကွား အောကျမှ လကျလြှိုသှငျးပွီး ကဈြကဈြပါအောငျဆုပျကိုငျလကျြ အားပါးတရ ဆောငျ့လိုးလတေော့သညျ။ ဘှပျ…. စွိစွိ… စှပျစှပျ… sပတျ…. အမလေး လေး…. အားပါးပါး.. ဖွေးဖွေး… ဖွေးဖွေးလုပျပါမောငျလေး ရယျ…… မမ ပဲ လုပျတော့…. ကွိုကျသလို ခဈြ တော့ဆို……. သွျောကှယျ မောငျလေးကလညျး…. လုပျနိူငျပွီဆိုတာနဲ့ မငျးကတအားဆောငျ့တာကိုး…. မမ မှာ တဈခါမှ အတှအေ့ကွုံမရှိတော့ နာလညျးနာ အောငျ့လညျးအောငျ့တယျကှယျ့…. မွတျနိူး ကပွောလိုကျသဖွငျ့ စိနျမွငျ့ သညျ သူမ၏စောကျ ခေါငျးထဲသို. အရမျးပဈသှငျးနသေော လီးကွီးကို အရှိနျသတ်လိုက်ကာ ဖွညျးဖွညျးနှငျ့ မှနျမှနျလေးဆောငျ့ပေးနလေိုကျသညျ။
အဲဒီလို ဆိုတျောသေးတာပေါ့.. မောငျလေး ရယျ.. ခုနကအတုငျးဆို မမ ဟာလေး ကှဲတော့မယျ့အတိုငျးပဲ အဲဒီ့လောကျလညျး မဟုတျ သေးပါဘူး မမ ရယျ.. ဘာလို့မဟုတျရမှာလညျး.. မငျးဟာကွီးက နညျးတာကွီးမဟုတျဘူး.. ထိုသို့ စိနျမွငျ့ ကတဈခကျြခွငျး ဆောငျ့နလေရော မွတျနိူး မှာကောငျးလာသဖွငျ့ သူမ၏တငျပါးကွီးမြားကို ကော့ကော့ပေးလာပွီး စိနျမွငျ့ ၏ လညျပငျးအား သိုငျး ဖကျလကျြ ရမ်မကျပွငျးသောမကျြလုံးအစုံဖွငျ့ မောငျလေး.. ဘာလဲ ဟငျ…မမ မငျးစိတျရှိသလောကျလုပျတော့ကှယျ… မမ မနနေိူ ငျအောငျယားတကျလာပွီ.. မွတျနိူး ကထိုသို့ပွောလိုကျသောအခါတှငျမတော့ စိနျမွငျ့ သညျ မွတျနိူး ၏ပေါငျတံနှဈသှယျအား သူ၏ပခုံးပျေါထမျးတငျလိုကျပွီး အားပါးတရပငျ ခပျသှကျသှကျဆောငျ့ကာလိုးလတေော့သညျ။
ဘှတျဘှတျ..ပွှတျ…စှပျ…ဗြိ.. ဟငျး ဟငျး ဟငျ….. ကောငျးလှခညျြလား…မောငျ..လေး..ရယျ… အခကျြနှဈဆယျ အစိတျလောကျ ဆကျတိုကျအားပါးတရဆောငျ့ပွီးသှားသောအခါ စိနျမွငျ့ သညျ မွတျနိူး ၏ ကိုယျပျေါမှောကျကာ ခဏနားလိုကျသညျ။ ကောငျးရဲ့ လားဟငျ…မမ.. ဘာကောငျးတာလဲ..မသိဘူး.. မွတျနိူး ကမူတူတူ မကျြနှာပေးဖွငျ့ စိနျမွငျ့ အားမကျြစောငျးထိုးလိုကျလသေညျ။ ခုနကတော့ ကောငျးလှခညျြရဲ့ဆို… မဆိုငပြါဘူး… ကဲပါ လုပျစရာရှိတာ လုပျတာမဟုတျဘူး… စကားကလညြးမွားလိုကတြာ.. စိနျမွငျ့ သညျသူ၏လိငျတနျကွီးအား မွတျနိူး ၏အခေါငျးထဲတှငျ စိမျလကျြ စကားလညျးပွောရငျး တလှုပျလှုပျဖွငျ့လိုးပေး နသေညျ။
သို.သော မွတျနိူး အဖို့မှာကား အရှိနျကောငျးနတေုနျး စိနျမွငျ့ ကမရိုးမရှဖွဈအောငျလုပျနသေညျ့အတှကျ ကာမဇောမြား ပိုတကျလာပွီး သူမ ၏ဖငျကွီးမြားမှာလညျး အငွိမျမနနေိူငျအောငျပငျဖွဈလာရသဖွငျ့ စိနျမွငျ့ အားဆကျပွီးလိုးပေးရနျ တိုကျတှနျး လိုကျလသေညျ။ မွတျနိူး ကထိုသို့ပွောလိုကျပွီးနောကျ စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏ကိုယ်ကို မွတျနိူးပျေါမှထကာ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျ အနအေထားသို့ပွောငျးလိုကျလသေညျ။ သို့သျော မွတျနိူး ၏စောကျခေါငျးအတှငျးသို့တဈဆုံးသှငျးထားသော သူ၏လီးတနျကွီးကို ကား ဆောငျ့လိုးရနျအတှကျ ပွနျပွီးဆှဲမထုတျသေးပဲ ဒီအတိုငျးပငျ စိမျကာထားလိုကျသညျ။ သူ၏မျက်လုံးများကတော့ မွတျနိူး ၏စောကျပတျကွီးကို ငုံ့ကာကွညျ့နလေသေညျ။
မွတျနိူး ၏စောကျပတျကွီးမှာ နဂိုကတညျးက မို့မို့ဖေါငျးဖေါငျး ရှိရသညျ့အထဲ စိနျမွငျ့ ၏တုတျခဲသော လိငျတနျကွီး ထိုးသှငျးထား သောကွောငျ့ အဆမတနျဖေါငျးကားကာနလေသေညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ ထိုဖေါငျးကားနသေော စောကျဖုတျကွီးအား သူ၏လကျဖဝါး ဖွငျ့အုပျကာ ပှတျသပျပေးလိုကျတော့ မွတျနိူး မှာ ထိုးထိုးထှနျ့ထှနျ့ဖွဈသှားလသေညျ။ အိုကှယျ..လုပျမှာဖွငျ့လညျး လုပျတော့လေ မောငျလေးရယျ.. မမ ကို မညှငျးဆဲပါနဲ့တော့နျော.. မမ တောငျးပနျပါတယျ.. ဟငျး ဟငျး ဟငျး… မွတျနိူး မှာ အစှမျးကုနျဖွဈ နပွေီး သနားစဖှယျတောငျးခံလာသောအခါတှငျ စိနျမွငျ့ သညျ သူမ၏စောကျခေါငျးထဲသို့ တဆုံးသှငျးထားသော သူ၏လီးခြောငျး ကွီးကို ဖွညျးဖွညျးလေးမှ တကယျ့ကို ဖွညျးဖွညျးလေး ဆှဲထုတျလိုကျလသေညျ။ မွတျနိူး ၏ ပါးစပျလေးသညျ တဖွညျးဖွညျး ဟ ကာသှားလသေညျ။
စိနျမွငျ့ သညျဖွညျးဖွညျးခငျြး ဆှဲထုတျနရော လီးကွီး ဒဈပျေါလာသောအခါတှငျ ဆကျကာဆှဲမထုတျတော့ပဲ ရပျလိုကျသညျ။ မွတျနိူး ကလညျး စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီးကွီးကို သူမ၏စောကျခေါငျးထဲသို့ ပွနျဆောငျ့ကာထညျ့တော့မညျဟု တှကျလကျြ ပေါငျကွောမြားကိုတောငျ့လကျြ စောကျဖုတျမကျြနှာပွငျမြားကိုတငျးလိုကျကာ မကျြစိစုံမှတျပွီးစောငျ့နလေသေညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီးခြောငျးကိုပွနျကာဆောငျ့မသှငျးသေးဘဲ သူ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ မာတငျးကာ ထိုးထိုးထောငျထောငျဖွဈနေ သော မွတျနိူး ၏နို့သီးလေးနှဈလုံးကို သူ၏လကျဖဝါးထဲထညျ့ကာ လှိမျ့ခပြေေးနသေညျ။ တျောတျောကွာသညျအထိ သူမ၏ အခေါငျးထဲသို့ မြှျောလငျ့စောငျ့စားနသေော စိနျမွငျ့ ၏ အတနျကထိုးဝငျလာခွငျးမရှိသဖွငျ့ မွတျနိူး သညျ စိတျမောစှာ သကျပငျြး တဈခကျြခလြိုကျပွီး စိတျကိုလြော့ကာ သူမ ၏မကျြလုံးမြားကိုဖှငျ့ကာ ကွညျ့လိုကျသညျ။ ထိုအခါတှငျမှ စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီး ကွီးကို မွတျနိူး ၏စောကျဖုတျအတှငျးသို့ တရှိန်ထိုး ထိုးသှငျးလိုကျလတေော့သညျ။
ဗွိ… ဘှပျ… ပလှတျ ပလှတျ… စှပျ..ဘုနျး… အမလေး… အား ဟား… ဖှငျ့လိုကျမိသော မွတျနိူး ၏မကျြလုံးအစုံသညျ ခကျြခငျြးပငျ ပွနျမှိတျကာသှားပွီး သူမ၏ ခါးလေးသညျလညျးကော့တကျကာသှားပွီး အျောဟဈကာသညျးတှားလိုကျသညျ။ စိတျကိုလြော့ကာ တဈကိုယျလုံးကိုပွနျပွီးပြော့လိုကျသောအခြိနျတှငျ စိနျမွငျ့ ၏လီးတနျကွီးသညျ မွတျနိူး ၏ စောကျခေါငျးအတှငျးသို့ ဂမူးရှုးထိုးဝငျ သှားပွီး သားအိမျဝကိုတရှိနျထိုးထောကျမိလသေောကွောငျ့ မွတျနိူး မှာအသံပေါငျးစုံထှကျသှားပွီး ဘုနျး ကနဲနအေောငျ သူမ ၏ဖငျကွီးကို မှယေ့ာထကျသို့ဆောငျ့ခလြိုကျမိသညျ။ ထို့ပွငျ ထိုလီးခြောငျးကွီးသညျ ဆောငျ့မလိုးတော့ပဲ ဆကျလကျဖိကပျထား ပွီး အပွညျ့အသိပျဖွဈနကော စကောဝိုငျး သကဲ့သို့လုပျပေးနသေညျ။ အမလေး.. ဟငျး ဟငျး… မောငျလေး ရယျ… ကောငျးလား ဟငျ… မမ အငျး..ကောငျး..ကောငျးတယျ…ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ… ခဈြကော ချစ်လား ဟငျ… ခဈြပါတယျကှယျ…လုပျ လုပျ… ဟငျး ဟငျး ဟငျး ဘယျလောကျထိခဈြလဲ အမြားကွီး..ကြှတျ ကြှတျ..အ များ ကွီးပဲ… အငျ့ အငျ့…လုပျပါတော့ကှယျ… မငျးကို မမ သိပျ… ခဈြပါတယျ.. ပထမ ဆောငျ့ကာလိုးထားသညျ့ အရှိန်ကလဲရှိ စောကျရညျတှကေလညျးမတရားထှကျနေ စောကျခေါငျးထဲတှငျ ပွညျ့ကပျြနပွေီး ဖိသိပ်ကာ စကောဝိုငျးပေးနသေောကွောငျ့ မွတျနိူး ၏ခံခငျြစိတျမြားမှာ ဆညျကြိုးသကဲ့သို့ တဟုနျထိုးမရပျနိူငျ အောငျဖွဈလာတော့သညျ။
ထို့ကွောငျ့လညျး စိနျမွငျ့ ကို တတှငျတှငျသာလုပျခိုငျးနသေညျ။ ဘာလုပျရမှာလဲ.. မမ ရဲ့… လိုးရမှာလား.. အငျး… ဟုတျ… ဟုတျ တယျ… ပွောလေ မမ ရဲ့… ဘာဟုတ်တာလဲ… ဟို…ဟို.. မမ ကို လိုးပေးပါကှယျ… လိုးပါတော့… လိုးပေးပါတော့… ဟငျး.. နောကျနေ့ ကရြငျ ကြှနျတျော လာလိုးရငျကော ခံမလား… ခံ…ခံပါ့မယျ… ဘာခံမှာလဲ.. အို..ဘယျလိုဖွဈနတောလဲ…မငျးလိုးတာကို…မမ ခံ ပါ့မယျ..ခံပါ့မယျ.. စိတ်ချပါ…ခု မမ ကိုလိုးပေးပါတော့ကှယျ.. နောကျတဈခါ ကြှနျတျောလိုးရငျ မမ ဖငျကုနျးပွီး အလိုးခံရမယျ..ဘယျ နဲ့လဲဖွဈမလား… ဖွဈတယျ…အငျး.ဟငျး..ဟငျး.. မငျးလိုးတာကို မမ ဖငျကုနျးပွီးခံပါ့မယျ… မငျးကွိုကျသလိုသာ မမ ကိုလိုးစမျး ပါ.. အမလေး ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ… အငျး မေးတာကို ပွနျဖွရေငျးနှငျ့ မွတျနိူး တဈယောကျ တစ်တစ်ခွခွ ပွောရတာကို အကွိုကျတှေ့ လာသညျ။ စကားလညျးဆုံးရော စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီးကွီးကိုတဈခကျြခငျြး လေးလေးပငျပငျ ဆောငျ့ကာလိုးလေ သညျ။
သုံးလေးခကျြမြှသာဆောငျ့ရ အပိုငျး(2) အငျး.ဟငျး..ဟငျး.. မငျးလိုးတာကို မမ ဖငျကုနျးပွီးခံပါ့မယျ… မငျးကွိုကျသလိုသာ မမ ကိုလိုးစမျးပါ.. အမလေး ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ… အငျး မေးတာကို ပွနျဖွရေငျးနှငျ့ မွတျနိူး တဈယောကျ တစ်တစ်ခွခွ ပွောရတာကို အကွိုကျတှေ့ လာသညျ။ စကားလညျးဆုံးရော စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီးကွီးကိုတဈခကျြခငျြး လေးလေးပငျပငျ ဆောငျ့ကာလိုးလေ သညျ။ သုံးလေးခကျြမြှသာဆောငျ့ရုံရှိသေးသညျ မောငျလေး….. မောငျလေး….. တအားဆောငျ့ပွီးလိုးပေးစမျးပါ….. ဆောငျ့…… ဆောငျ့ပါ မောငျလေး ရယျ…. ဘှပျ…..ပွှတျ…..ပွှတျ…ဘှပျ….. ဟုတ်ပီ မောငျလေး ရယျ… အဲဒီလိုမြိုးဆောငျ့ပါ….အား…..အငျး… စိနျမွငျ့ ကသူ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ မွတျနိူး ၏နို့နှဈလုံးကိုဆုပျကိုငျကာ အားပါးတရဆောငျ့ကာ လိုးလတေော့သညျ။ မွတျနိူး က လညျး သူမ၏ ဖငျကွီးတှကေို အိပျယာပျေါမှ ကွှတကျလာသညျအထိ ကော့ကော့ပွီး အားပါးတရအလိုးခံလသေညျ။ ခဏကွာ သောအခါ တဈကိုယျလုံးအီဆိမျ့ကာတကျလာသော စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီးခြောငျးကို မွတျနိူး ၏စောကျခေါငျးအတှငျးမှ တစ်ဆုံး နီးပါးဆှဲကာဆှဲကာထုတျပွီး ဆောငျ့ပါလတေော့သညျ။
ပွှတျ…..ဘှပျ…… ပလှတျ….. ဘှပျ…. အမလေး လေး…. မမ ဘယျလိုဖွဈ….. အမလေး…..အား အား…အှနျး အှနျး…. အိ.. မ……..မ…… အိုး…… အား မွတျနိူး တဈကိုယျလုံးမွောကျကွှကာ ကော့တကျသှားခြိနျမှာပငျ စိနျမွငျ့ သညျလညျး ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျ ဖွဈလကျြ မွတျနိူး ၏ကိုယ်လုံးဆီသို. သူ၏ကိုယျလုံးကွီးမှာ မှောကျရကျကသြှားလကျြ နှဈယောကျသားစလုံး ကာမအထှတျအထိပျ သို့ ပွိုငျတူရောကျသှားလတေော့သညျ။ ဒီည ထှနျးဝငျး နှငျ့ ခြိနျးထားသညျ့အတှကျ လှလှမိုး ရငျတှခေုနျနသေညျ။ ထှနျးဝငျး နှငျ့ လှလှမိုး တို့ခဈြနကွေသညျမှာ တဈနှဈ နီးပါးရှိနကွေပွီဖွဈသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ တဈပတျလောကျကာမှသာ ဆိတျကှယျရာ နရော တှငျ ဆုံဖွဈခဲ့ပွီး ကာမစပျယှကျသညျအထိ ဖွဈခဲ့လသေညျ။ ထိုနကေ့ အိမျရှငျမြားပွနျရောကျလာသဖွငျ့ ထှနျးဝငျး နှငျ့ လှလှမိုး တို့တဈကွိမျသာလုပျလိုကျရပွီး မပွနျခငျြပွနျခငျြဖွငျ့ သူတို့နှဈယောကျ ခြိနျးတှသေ့ောအိမျမှ ပွနျခဲ့ရလသေညျ။
အာသာမပွသေော ထှနျးဝငျး ကနောကျထပျတှရေ့နျခြိနျးသျောလညျး လှလှမိုး သညျ မိနျးခလေးပီပီ ကိုထှနျးဝငျးကိုခကျြခငျြးကွီးမလိုကျလြော သေးပဲ ရကျအတနျငယျကွာသောအခါမှ ဒီညတှငျအိမျသို့လာရနျခြိနျးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ဘယ်လို အိမျထဲသို့ဝငျလာရမညျကို လှလှ မိုး က ထှနျးဝငျးအား အသေအချာ ရှငျးပွထားပွီးဖွဈသညျ။ လှလှမိုး သညျ ထှနျးဝငျး လာလြှငျအလှယျတကူအိမျထဲသို့ ဝငလြာနိူငြ ရနအြတှကြ အိမျနောကျဖေးတံခါးကို စရေုံ့သာစထေ့ားခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ ဖွဈခငျြတော့ ဒီနညေ့မှမီးကပွတျသှားသညျ။ (ဘယျနှဈခု နှဈက ကစာအုပျလညျးမသိဘူး၊ မီးပွတျသှားတာကို အထူးအဆနျးလုပျပွီး ထညျ့ရေးထားတယျ။ စကားခပျြ) လှလှမိုး ပိုပွီး အကွိုကျတှသှေ့ားသညျ။
လှလှမိုး သညျ မှနျရှသေို့သှားကာ အခနျးထဲတှငျထှနျးထားသော ဖယောငျးတိုငျမီးဖွငျ့ သူမ ၏ကိုယျလုံး လေးကို လှညျ့ပတျကာကွညျ့နသေညျ။ ပွီးနောကျ လှလှမိုး သညျ သူမ၏ကိုယျပျေါမှ အကငြ်္ီတှကေိုခြှတျလိုကျပွီး ထမီကိုရငျလြှား လိုကျလသေညျ။ ပွီးတော့ ဖယောငျးတိုငျမီးကို မှုတျလိုကျပွီး ကုတငျပျေါတှငျလှဲနလေိုကျသညျ။ လှလှမိုး သညျ တဈခါကွုံဖူးပွီဖွဈ သဖွငျ့ ကာမအရသာကိုကောငျးမှနျးသိနပွေီဖွဈသညျး ယခုလညျး သိပျမကွာမီမှာပငျ ခံစားရတော့မညျဖွဈသော အရသာအတှကျ ကွိုတငျကာ ရငျခုနျနမေိလသေညျ။ ထှနျးဝငျး ကလညျး ယခုအခြိနျအထိပျေါမလာသေး၊ စိတျတှကေလညျး အရမျးထလာပွီဖွဈ သဖွငျ့ လှလှမိုး သညျ မနနေိူငျမထိုငျနိူငျဖွဈကာ ပေါငျနှဈလုံးကွားကိုလကျထညျ့ကာ ရှရှလေးပှတျပေးနမေိသညျ။
ဟိုတဈနကေ့ မွတျနိူး ၏ အပြိုရညျကိုရယူပွီးနောကျ နောကျထပျတှကွေ့ရနျထပျခြိနျးသော အခါတှငျ မွတျနိူး ကဧညျ့သညျမြား လာမညျဖွဈသဖွငျ့ သုံးရက်ခွါကာ ဒီနညေ့တှငျလာခဲ့ရနျ စိနျမွငျ့ အားခြိနျးလိုကျလသေညျ။ အမှနျတကယျတှငျတော့ မွတျနိူး သညျ အစိမျးသကျသကျဖွဈသညျ့အတှကျ ထိုနကေ့စိတျတိုငျးကပြွုမူထားသညျလညျးဖွဈသညျ့အတှကျ သူမမှာ နာကငျြကိုကျခဲနမေညျ ကို စိုးရိမျသညျ့အတှကျ သုံးရကျခွားကာ ခြိနျးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ နှာထနျကာအပေးကောငျးသော ဆရာမ မွတျနိူး ကို နှဈသကျစှဲလနျးကာ နောကျတဈကွိမျအမွနျတှခေ့ငျြနသေညျ့အလြောကျ စိနျမွငျ့ သညျ မွတျနိူး တို့အိမျသို့လှမျးခဲ့လသေညျ။
အိမျထဲရောကျတော့ မီးကပကျြနသေဖွငျ့ စိနျမွငျ့ သညျစမျးတဝါးဝါးဖွငျ့လာခဲ့ရသညျ။ အခနျးထဲသို့ရောကျသောအခါ ကုတငျရှိ မညျထငျသောနရောသို့မှနျးဆကာ ဝငသြှားသညြ။ ကုတငျ နှငျ့ သူ၏ခွထေောကျတို့ တိုကျမိသောအခါ ကုတငျကို လကျနှငျ့စမျးရငျး တကျထိုငျလိုကျသညျ။ နူးညံ့အိထှေးလှသော ကိုယျလုံးလေးကိုစမျးမိသောအခါ စိနျမွငျ့ သညျသူ၏ပုဆိုးကို ကုတငျအောကျမှာပငျ ခြှတျခလြိုကျပွီး သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို လှမျးဖကျလိုကျလသေညျ။ ပွီးတော့ စိနျမွငျ့ သညျ သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို အငမျးမရ ပွတျသပ်ကာ မကျြနှာအနှံ့ တရစပျနမျးလတေော့သညျ။ စိနျမွငျ့ ၏လက်က သူမ၏တစ်ကိုယ်လုံး ကို ပှတျသပျဆုပျနယျပေးနလေတေော့ သူမ၏ကိုယျပျေါတှငျ ထမီတဈထညျသာ ရငျလြှားထားသညျကို သိရသဖွငျ့ သူမ၏ထမီကိုဆှဲပွီးခြှတျလိုကျရာ သူမကလညျး ဝိုငျး ကာခြှတျပေးသညျ။
မွတျနိူး ၏ပါးတှငျ အရငျတဈခါနမျးတုနျးကလို ရှငျမတောငျသနပျခါး မရဘဲ မိတျကပျနံ့ရသဖွငျ့ မမနိူး တဈယောကျ သူလာမညျကို သိသဖွငျ့ မိတျကပျလူးထားပေးသညျဟုထငျကာ စိနျမွငျ့ မှာ သဘောခှသှေ့ားလသေညျ။ သူမ ၏ကိုယျပျေါမှ ထမှကြှတျသှားသညျ နှငျ့ စိနျမွငျ့ သညျလညျး သူ၏အကငြ်္ီကို ကမနျးကတနျးခြှတျလိုကျပွီး သူမ၏နို့ကို ကုနျးကာစို့လိုကျလသေညျ။ ပွီးတော့ လက်တစ်ဖ က်က သူမ၏ပေါငျကွားထဲသို့ သူ၏လကျကိုထညျ့ကာ စောကျဖုတျလေးကိုစုပျကိုငျလိုကျလသေညျ။ ဟငျ…… သူမ ၏စောကျဖုတျ လေးမှာ အရညျတှစေိမျ့ထှကျနသေညျ့အပွငျ ဟိုနတေု့နျးကလို စောကျဖုတျပျေါရှိ စောကျမှေးမြားမှာ ခပျရှညျရှညျ ထူထူထဲထဲလေး မဟုတျဘဲ ခပျပါးပါးဖွငျ့ ငုတျစိလေးဖွဈနသေညျကို သတိထားလိုကျမိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ စိနျမွငျ့ လညျးအံ့သွသှားပွီး နှုတျမှ ဟငျ ကနဲထှကျသှားစဉျ သူမကလညျးတဈစုံတဈခု ကို ပွောရနျပါးစပျပွငျလိုကျစဉျမှာပငျ အဟမြ……အဟမြး…… အခွားတဈဖကျခနျး ရှိ အိပျခနျးထဲမှ ဖခငျဖွဈသူ၏ ခြောငျးဟနျ့သံကို ကွားရသဖွငျ့ ဘာမှမပွောတော့ဘဲ အသာငွိမျနလေိုကျသညျ။
သူမ ၏လကျနှဈ ဖကျကတော့ ဘေးမှနကော သူမ၏ကိုယျပျေါသို့မှောကျကာ နို့စို့ပေးနသေော စိနျမွငျ့၏ကိုယျလုံးကွီးကို ဖကျထားလသေညျ။ အတျောပငျ စိတျထလာပွီဖွဈသော စိနျမွငျ့ သညျ နို့စို့ရငျးမှ သူမ ၏ကိုယျဆီသို့ခှတကျလိုကျရာ သူမကလညျး အလိုကျသငျ့ပငျ ဒူးထောငျပွီး ပေါငျနှဈခြောငျးကိုကားပေးလိုကျသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ သူ၏လီးကွီးကိုကိုငျကာ သူမ၏ စောကျပတျဝကိုတစေ့မျးပွီး ထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ ဗွဈ…..ဗွဈ……ဗြိ…. ဖွဈ…. ဘှပျ… အိ…အု….အု.. သူမ ၏တဈကိုယျလုံးမှာတုနျကာတကျသှားလသေညျ။ စောကျခေါငျးထဲသို့ဝငျလာသော လီးကွီးကား အခေါငျးနှငျ့ မဆနျ့ဘဲ ကွပျသိပျလှနျးသဖွငျ့ လှလှမိုး မှာ အတျောပငျနာသှားလေ သညျ။ သို့သျောလညျး တဈဖကျခနျးရှိ ဖခငျတို့ အသံကွားသှားမညျစိုးသဖွငျ့ အသာအယာ အသံတိုးတိုးဖွငျ့ အျောသညျးလသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ စောကျပတျသာယခုထကျပိုပွီး ပွဲအာသှားသျော နညျးနညျးသကျသာသှားမညျဟုတှေးကာ သူမ၏ထောငျထားသော ပေါငျနှဈဖကျကို အစှမျးကုနျကားပွီး သူမ၏လကျနှဈဖကျကို ပေါငျကွားထဲသို့ထညျ့ကာ စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကို ဖွဲပေး လသေညျ။ လီးကဝငျသှားပွီဆိုသညျနှငျ့ စိနျမွငျ့ သညျ တဈခကျြခွငျးဆောငျ့ကာလိုးလသေညျ။ စိနျမွငျ့ မရောကျမီကထဲက စိတျ တှထေနသေော လှလှမိုး ကလညျး အောကျမှနကော ကော့ပေးပွီးကောငျးကောငျးအလိုးခံနသေညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ အရှိနျရလာပွီ ဖွဈသဖွငျ့ တဈခကျြခွငျးမဟုတျတော့ဘဲ ခပျသှကျသှကျ ဆောငျ့ကာပေးနလေပွေီ၊ သူမကလညျး စောကျပတျနှဈခွမျးကို အသအေခြာဖွဲပေးကာ တအငျးအငျး နှငျ့ဖွဈလာနခေပြွေီ။ ထိုအခိုကျမှာပငျ စောစောကပွတျသှားသောမီးက ဖွတျကနဲပွနျလငျး လာသညျ။
ဟငျ…… အို……. စိနျမွငျ့ ကသူမကိုအရငျတှလေို့ကျရသညျ။ သူလိုးနသေညျမှာ မွတျနိူး မဟုတျဘဲ မွတျနိူး၏ညီမ အသကျ(၁ဂ) နှဈသာရှိသေးသော လှလှမိုး ဖွဈနသေညျကို မီးရောငျအောကျတှငျတှလေို့ကျရသညျ။ စိနျမွငျ့ ၏ ဟငျ ဆိုသောအသံကွောငျ့ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့မိလိုကျသော လှလှမိုး မှာလညျး သူမကို ယခု အားပါးတရလိုးနသေူသညျ ထှနျးဝငျး မဟုတျဘဲ လှနျခဲ့သော သုံး ရကျလောကျက သူမ အစ်မ ၏ အိပျခနျးထဲမှထှကျလာသော စိနျမွငျ့ ဖွဈနသေညျကို တှရေ့သဖွငျ့ အံ့သွသှားမိသညျ။ သူတို့နှဈ ယောကျ၏အနအေထားကလညျးကွညျ့ပါဦး။ နှဈယောကျစလုံး ဝတလြဈစလဈဖှဈကာ အရညျတှစေိုရှဲနသေော သူမ၏အစှမျးကုနျဖွဲကားပေးထားသော စောကျပတျကွီးထဲသို့ စိနျမွငျ့ က သူ၏လီးကွီးကို အဆုံးထိ ထိုးသှငျးထားပွီး တဈ ယောကျနှငျ့တဈယောကျ အံ့သွစှာဖွငျ့ မကျြလုံးအပွူးသားနှငျ့စိုကျကွညျ့နသေောအဖွဈ။
ဟာ…. မိုးမိုး ပါလား…. သူမ ကတော့ဘာမှ ပွနျမပွောပဲ ပွုံးစိစိဖွငျ့ စိနျမွငျ့ ကို ကွညျ့နသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ စိနျမွငျ့ သညျ မလုံမလဲဖွငျ့ ခှငျ့လှတျပါ မိုးမိုး ရယျ….. အကိုက မမနိူး မွတ်လို့ပါ….. ဒြီလိုလုပနြတော ဘယျလောကျကွာပျွီလဲ မကွာသေးပါဖူး မိုးမိုး ရယျ အယငျ(၃)ရကျလောကျတုနျးကပါ ကြှနျမ သိပါတယျ.. ဟငျ….. မိုးမိုး ကသိတယ်လား….. အခု မမနိူးက… မမနိူး အခနျးက ဟိုဖကျမှာ…. ကဲပါ ခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူး၊ လုပ်စရာရှိသာတာ လုပျပါတော့…. ဟုတျမှလဲလုပျပါ မိုးမိုး ရယျ… မိနျးကလေးတဈယောကျက အရှကျကိုတောငျမငဲ့ဘဲ ပွောလာပွီဘဲ၊ စဉျးစားကွညျ့ပါဦး အကိုရယျ.. ဒီလိုဆိုလညျး.. ကဲ….. ကဲ… ဘှပျ…. ပွှတျ…. ပွှတျ…စှပျ….စွိ….. အငျး…အု…ဟား.. စိနျမွငျ့ သညျအားပါးတရဆောငျ့ကာ လိုးလိုကျရာ လှလှမိုး မှာကော့ကာ တကျသှားလသေညျ။ အမလေး….. နာလညျးနာ ကောငျးလညျးကောငျးပါလား အကိုရယျ….. လှလှမိုး သညျသူမ၏ခေါငျးကို ဘယျညာ ရမျးလကျြ စိနျမွငျ့ ၏ရငျအုပျကွီးအောကျမှနကော ဆီးတှနျးထားမိသညျ။ စိနျမွငျ့ သညျ သူမ ၏လကျနှဈဖကျကိုအသာဖယျပွီး မို့မောကျကာတငျးအိနသေော နို့ နှဈလုံးအား တဈလုံးစီစို့ပေးနရော သူမ၏ခါးမှာ တဖွညျးဖွညျးကော့တကျလာသညျ။ ထိုသို့ကော့လာသောအခါ စိနျမွငျ့ သညျ ခပျပွငျးပွငျး (၃)(၄) ခကျြလောကျဆောငျ့ခပြေးလိုကျပွနျသညျ။
အမလေး…. အကိုရယျ…..ဖွေးဖွေး… လှလှမိုး ၏တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဖွတျဖွတျလူးသှားလသေညျ။ စိနျမွငျ့ သညျဆကျမဆောငျ့တော့ ဘဲ သူမ၏နှုတျခမျးမြားကိုစုတျပေးလိုကျရာ လှလှမိုး သညျတဖွညျးဖွညျးငွိမျကသြှားလသေညျ။ တို့နောကျ စိနျမွငျ့ သညျ တဆုံး သှငျးထားသော သူ၏လီးကို လှလှမိုး စောကျခေါငျးအတှငျးသို့ဖိသိပျကာ နှဲ့ပေးလသေညျ။ ထို့ပွငျ သူမ၏နို့အုံမြားကို ဖွညျးညငျးစှာ ဆုပျနယျပေးလိုကျ၊ တဖနျ နို့သီးခေါငျးမြားကို လကျမနှငျ့ လကျညှိုးကွားတှငျ လှိမျ့ကာခပြေေးလိုကျ လုပျ ပေးလိုကျသောအခါတှငျ လှလှမိုး ၏စောကျပတျနှုတျခမျးသား နှဈခုသညျ ပှစိပှစိဖွဈလာပွီး စောကျခေါငျးအတှငျးမှ တဈစုံတဈရာ ကလညျး စိနျမွငျ့ ၏လီးထိပ်ဖျားကို ရဈပတျကာဆှဲညှဈထားလသေညျ။ အကို…. ဘာလဲ မိုးမိုး… မမ ကိုလုပျတုနျးက ဒီလိုဘဲလား ဟငျ….. ဟုတျတယျ… အစကတော့ ဒီလိုပဲနာတာပေါ့….. နောကျတော့ကောငျးတယျဆိုပွီး ဆောငျ့ခိုငျးတော့တာပါပဲ …. ဒါဖွငျ့ …… ကြှနျမကိုလညျး ….. ဟာ ရှကျစရာကွီး …… အကွောငျးသိသှားပွီဖွဈသော စိနျမွငျ့ သညျ သူမ၏နို့နှဈလုံးကိုဆှဲကာ တဈ ခကျြခွငျး မှနျမှနျဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။
ကောငျးတယျ အကိုရယျ ….. နောကျဆို ဒီ့ထကျတောငျ ကောငျးဦးမယျ ….. စိနျမွငျ့ သညျ ဖွေးဖွေးနှငျ့ မှနျမှနျသာဆောငျ့ပေးနေ သဖွငျ့ အားမလိုအားမရဖွဈလာသော လှလှမိုး သညျ စိနျမွငျ့ ၏ကြောပွငျကို ပှတျသပျရငျး မွနျမွနျလေး ဆောငျ့ပေးပါ အကိုရယျ ….. ကြှနျမ အထဲတညျးက မနနေိူငျအောငျ ယားတကျလာပွီ ….. ဒါကွောငျ့ထငျပါရဲ့ မိုးမိုး ရဲ့ အထဲတညျးက အကို့ဟာကိုစုပျယူနေ တယျ….. လှလှမိုး ၏စောကျပတျမှာ မြှော့ဖွဈသဖွငျ့ စိနျမွငျ့ ၏လီးထိပ်ဖျားကို ရဈပတျပွီး တမွှငျးမွှငျးစုတျယူလာရာ စိနျမွငျ့ သညျ ထူးကဲသောအရသာကို ခံစားရလသေညျ။ စုပျမြှော့၏ ဒါဏ်ကို ကွာရှညျမခံနိူငျသော စိနျမွငျ့ မှာ လှလှမိုး ၏ ပခုံးနှဈဖကျကို ကဈြကဈြပါအောငျဆုပျပွီး မနားတမျးပငျဆောငျ့လတေော့သညျ။ မကွာမီ မှာပငျ ဟား….. အကို …. အမလေး လေး ….. ဟား…..ဟား ဟား …. ကောငျးလှခညျြလား မိုးမိုးရယျ… အကိုမနနေိူငျတော့ဘူး… ဟငျး ဟငျး ဟငျး ….. ဟူသော အသံတို့နှငျ့ ပထမ မိုးမိုး က စိနျမွငျ့ ၏ကိုယျလုံးကွီးကိုကွုံးကာဖကျလိုကျပွီး စိနျမွငျ့ကလညျး
သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကိုပွနျလညျကွုံးဖကျကာ နှဈဦးစလုံး တှနျ့ကာလိမျကာ နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြ ဖွငျ့ ကာမအထှတျအထိပျသို့ တကျ လှမျးပွီး သားအိမျဝထိအောငျပနျးထုတျလိုကျသော စိနျမွငျ့ ၏သုတျရညျမြားကို လှလှမိုး ကစုပျယူနလေတေော့သညျ။ စိနျမွငျ့ နှငျ့ ခြိနျးထားသော မွတျနိူး သညျ ကုတငျပျေါတှငျတဈစောငျးလေးလှဲကာ စောငျ့မြှျောကွိုလငျ့နရေငျး သှေးသားမြား ထကွှနလေေ သညျ။ ပွီးတော့ မီးကလညျးပကျြနသေဖွငျ့ တဈယောကျထဲ ကုတငျပျေါတှငျ စိတျကူးနရေငျး စိတျမြားထကွှသညျထကျ ထကွှလာ သဖွငျ့ သူမ၏အဝတျအစားမြားကို ခြှတျကာ စောငျပါးလေးတဈထညျကို သူမ၏ကိုယျပျေါလှားလိုကျသညျ။ သိပျမကွာလိုကျပါခြေ သူမ၏ကုတငျဘေးသို့ လူတဈယောကျ ရောကျလာသညျကိုသိလိုကျရသညျ။ ထိုသူသညျ အမှောငျထဲတှငျ သူမ၏ကိုယျလေး ကိုစမျးသညျ။ မှတနြိူး ကလညျးငွိမျနသေညျ။
သူမ၏ကိုယျပျေါတှငျ အဝတျအစားမရှိဘဲ စောငျပါးလေးတဈထညျသာ လှမျးခွုံထားသညျကို သိရသဖွငျ့ ထိုသူကလညျး သူ၏အဝတျအစားတှကေို ကုတငျဘေးတှငျရပျလကျြခြှတျပဈလိုကျသညျ။ ပွီးမှ ကုတငျဆီသို့ ဒူးထောကျကာတကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သူမ၏ကိုယျပျေါမှ စောငျပါးလေးကို ဆှဲခှါပွီး သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို တငျးကွပျစှာဖကျကာ မကျြနှာအနှံ့နမျးသညျ။ နှုတျခမျးဖြားလေးကို အသာစုပျကာနမျးသညျ။ နှုတျခမျးလေးကို ခဏမျှ စုပျနမျးပေးပွီးတော့ သူမ၏နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို သူ၏ပါးစပျဖွငျ့ အားပါးတရစုပျပေးလသေညျ။ သူ၏လကျကလညျးအငွိမျမနပေါ၊ မွတျနိူး ၏စောကျဖုတျလေးကိုအသာအုပျကိုငျ ကာ အကှဲအကွောငျးတဈလြောကျ ပှတျသပျပေးလိုကျသညျ။ စောကျပတျ တှငျ စောကျရညျကွညျမြားမှာ ရှဲနဈကာနလေပွေီ။ ပွီး တော့သူက မွတျနိူး ၏ပေါငျနှဈလုံးကို ဒူးကှေးကာထောငျလိုကျပွီး ပေါငျနှဈခြောငျးကိုကားကာ ပေါငျကွားထဲတှငျ ဝငထြိုငလြိုကြ သညြ။ ထို့နောကျ သူ့မကျြနှာက မွတျနိူး ၏စောကျပတျဆီသို့မှောကျခလြိုကျသညျ။
မွတျနိူး သညျ သူမ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ သူ့ခေါငျးကို လှမျးကိုငျကာ တဈခုခုပွောတော့မညျ့အခြိနျတှငျ အဟမျး…. အဟမျး ….. အခွားတဈဖကျခမျးမှ ဖခငျဖွဈသူ၏ခြောငျးဟနျ့သံကိုကွားလိုကျရသဖွငျ့ ဘာမှမပွောတော့ပဲ နှုတျခမျးလေးကို ကိုက်ကာ မာနျတငျး လိုကျလသေညျ။ ထိုသူ၏မကျြနှာကတော့ မွတျနိူး ၏အဖုတျပျေါမှောကျကသြှားရုံမကာ စောကျပတျအကှဲကွောငျးကိုပငျ သူ၏လြှာဖွငျ့ ထိုးယကျကာနလေပွေီ။ အိ… အို… အှနျး …. မွတျနိူး မှာခါးလေးကော့တကျလာလိုကျ ဖငျကွီးတှေ မှယေ့ာပျေါမှ ကွှတကျလာလိုကျဖွငျ့ တစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ နလေသေညျ။ သူမ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ မွတျနိူး စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကိုဖွဲ ကာ သူ၏လျှာကို စောကျခေါငျးထဲသို့ထိုးထညျ့ကာ အဆကျမပွတျယကျပေးနသေညျ။ အား … အမလေး … အို… ရှီး ရှီး …. မွတျ နိူး ၏တစ်ကိုယ်လုံး သှကျသှကျခါရငျး နှုတျခမျးနှဈလှာကို မစနေိူ့ငျတော့ဘဲ သညျးတှားလိုကျရှာသညျ။ မွတျနိူး သညျ သူ့လြှာဒဏျကို မညျသို့မြှဆကျပွီး မခံနိူငျတော့။ အထဲတညျးတှငျ ယားကာတကျလာလိုကျသညျမှာလညျး မပွောပါနှငျ့တော့။
တျောပွီ …. မယကျနဲ့တော့ …. ဟို ကုနျးပေးမယျ …. လိုးပါတော့ …. မွတျနိူး သညျအသံကို အုပ်ကာ မသဲမကွဲ တီးတိုးလေးပွောလိုကျ လသေညျ။ ဟုတျပါသညျ။ ပွီးခဲ့သော ၃ရကျလောကျက စိနျမွငျ့ အား မွတျနိူး ကနောကျတဈခါဆိုလြှငျ ဖငျကုနျးပွီးခံမညျဟု ကတိ ပေးခဲ့သညျ။ ယခုလညျး စောကျပတျကို လြှာဖွငျ့ အကလိခံရသညျ့ဒဏျကို မခံနိူငျတော့ သညျကတဈကွာငျး၊ နှာလညျးအလှနျထ ကာ ခံခငျြနပွေီဖွဈသောကွောငျ့၎င်းငျး မွတျနိူး က ဖငျကုနျးပေးမညျဟုဆိုလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ မွတျနိူး ထိုသို့ပွောပွီးသညျ့အခြိနျ မတော့ ထိုသူသညျသူ၏ မကျြနှာကို စောကျပတျ ဆီမှခှါလိုကျပွီး ထထိုငျလိုကျလသေညျ။ မွတျနိူး သညျအမောပငျဖွမေနတေော့ပဲ ခကျြခွငျးလူးလဲထကာ အိပျယာပျေါတှငျလေးဖကျထောကျပေးလိုကျသညျ။ သူက တော့ မွတျနိူး ၏နောကျတှငျ ဒူးထောကျကာ ထိုငျလိုကျပွီး လုံးတဈနသေော မွတျနိူး ၏ဖငျကွီးတှကေို လကျဖွငျ့စမျးပွီး ငုံ့ကာနမျးလိုကျသောအခါ မွတျနိူး ခါးသညျ ခှကျသှား ပွီး တငျသားမြားမှာလညျးခါယမျးသှားလသေညျ။
ပွီးတော့ နောကျသို့စူထှကျနသေော မွတျနိူး ၏စောကျဖုတျကွီးကိုလကျဖွငျ့စမျး ကာ သူ၏လီးတံကွီးကို စောကျပတျဝတှငျတပွေီ့း စောကျပတျအကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ လြောတိုကျပွီး သူ၏လဒဈဖွငျ့ပှတျ ပေးလိုကျသောအခါ မွတျနိူး ၏ဖငျကွီးမြားသညျ တလှုပျလှုပျဖွငျ့ ယမျးကာနလေသေညျ။ ပွီးတော့လညျး သူ၏ထိပျဖွငျ့ မွတျနိူး ၏စောကျစလေ့ေးကို ဖိဖိထိုးပေးနလေသေညျ။ အစကတညျးက အတျောခံခငျြနပွေီဖွဈသော မွတျနိူး မှာ စောကျရညျကွညျမြား သူမ၏ပေါငျဆီသို့ စီးကလြာသောအခါတှငျ ဆကျလကျသညျးမခံနိူငျတော့သဖွငျ့ လုပျ ….. လုပျ..တော့လေ ….. လိုးတော့ ….. ဟငျ့ အသံအုပျအုပျဖွငျ့ မသဲမကွဲ ဗလုံးဗထှေးပွောလိုကျလသေညျ။ ဒီတော့မှ သူ၏လီးခြောငျးကွီးကို စောကျပတျဝတှငျပွနျတေ့ ပွီး သူမ၏ခါးကိုလကျဖွငျ့စုံကိုငျကာ လိုးသှငျးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သူ၏လကျနှဈဖကျက မွတျနိူး ၏ခါးကို သခြောစှာဆုပျကိုငျ ပွီး အားပါးတရဆောငျ့လိုးလတေော့သညျ။
ပလှတျ… ဘှတျ … ပွှတျ … စှပျ …. အ .. အငျ့ .. အ .. အို .. အရှိနျကောငျနတေုနျးရှိခြိနျမှာပငျ ပွတျသှားသောမီးကပွနျလာသဖွငျ့ မီးခြောငျးလညျးပွနျလငျးလာသညျ။ ဟငျ .. မမြတ်နိူး .. အို .. ကိုထှနျးဝငျး လား .. မွတျနိူး ကား လေးဖကျထောကျပွီး ဖငျကုနျးပေး ထားသဖွငျ့ လိုးနသေူ၏မကျြနှာကို မမွငျရ၊ သို့သျော သညျအသံကိုတော့ ကကျြမိနသေညျ။ သူမ ကိုလိုးနသေူသညျ စိနျမွငျ့ မဟုတျပဲ သူမ ညီမ၏ ရညျးစားဖွဈသူ ထှနျးဝငျး ဖွဈနကွောငျးသိလိုကျရသောအခါ မွတျနိူး မှာထိတျလနျ့ တုနျလှုပျသှားလသေညျ။ ဒါပမေဲ့လညျး သူမ၏ အခေါငျးတှငျးသို့ သှငျးထားသော လီးတနျကွီးပွနျနှုတျသှားမှာကိုလညျး မလိုလားပါ။ ထို့ကွောငျ့ ကဲပါလေ .. အခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူး .. လုပ်စရာ ရှိသာတာ လုပျပါတော့ .. ကိုထှနျးဝငျး ရယျ .. ထှနျးဝငျး သညျ လှလှမိုး နှငျ့ကွိုကျနေ သျောလညျး မွတျနိူး ကို ခိုးခိုးကွညျ့ကာ စိတျဖွငျ့ပဈမှားလာခဲ့သညျမှာ အတျောပငျကွာလှပွီ။ ယခု သူစိတျကူးထဲတှငျသာ လိုးနရေ သော မွတျနိူး ကတကယျ့အပွငျတှငျ လိုးပေးရနျပွောလာသောအခါ ထှနျးဝငျး သညျ စိတျကိုလှတျလကျြ အားပါးတရပငျဆောငျ့လိုး လတေော့သညျ။
ဘှတျ .. ဗွှတျ .. စွိ စွိ .. အို .. အား ဟား .. ကောငျးလိုကျတာ .. ကိုထှနျးဝငျး .. ဆောငျ့ ဆောငျ့ နာနာဆောငျ့ ….. အ အ အား ………….. မွတျနိုးနှငျ့ လှလှမိုးတို့ ညီအဈမနှဈဦးကား ခဈြသူခငျြးလဲလှယျကာ ခံစားလရှေိ့ကွသော ” ဘုံအခဈြ ” ၏ အရသာကိုမ မြှျောလငျ့ပဲ ခံစားမိကွလတေော့သတညျး။ …..
ဆရာမ မမြတ်နိူးသည်အသက်(၂၆) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အပျို တစ်ယောက်ဖြစ်သသည် အသားဖြူဖြူကိုယ်လုံးတောင့်တောင့်နှင့် ချောမောလှပသူဖြစ်ပြီး အလုပ်ကလည်းကျောင်းဆရာမဆိုတော့ အိနြေ္ဒသိက္ခာ ကလည်းကြီးသည်။ ဝတျစားဆငျယငျပုံကလ ညျး မကလက်ပဲခောတ်နှင့်အမှီလိုက်သည်။ မျမတ္နိူး တစ်ယောက်စာဖတ်နေစဉ်မှာပင် သူမ၏အနီးသို.လူတစ်ယောက်ဗြုံးကနဲ ရောက်လာသဖြင့် အထိတ်တလန်.ဖြင့်မော့ကြည့်လိုက်သည်။ထိုသို.မော့အကြည့်မှာပင်ထိုသူကလျှင်မြန်စွာဖြင့် သူမ၏ပါးစပ်ကို ပိတ်ကာကုတင်ပေါ်သို.ပွေ.တင်လိုက်လေသည်။ မြတ်နိူး ကိုယ်လုံးလေးကုတင်ပေါ်သို.ရောက်သွားသောအခါ ထိုသူကလည်း
ဒူးထောက်ကာတက်လိုက်သဖြင့် မြတ်နိူး ၏ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားသော လက္ကေလ်ာ့ရဲရဲ ဖြစ်သွားခိုက် မြတ်နိူး ကလည်း အတင်း ရုန်းကန်လိုက်သဖြင့် သူမ၏ပါးစပ်မှာ ထိုသူ.လက်မှလွတ်သွားလေသည်။ ဘယ်….ဘယ္လိုလုပ္တာလဲ…မောင်စိန်မြင့်…. မင်းဟာ တော်တော်ဆိုးတာပဲ…. မြတ်နိူး ကမောဟိုက်သံဖြင့်ပြောလိုက်သည်။ စိန်မြင့် ဆိုသူက မြတ်နိုးတို့အိမ်နားမှ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံး နှစ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြတ်နိုး ကျောင်းသွား^ကျောင်းပြန် စိန်မြင့်ခိုးခိုးကြည့်ပြီး မချင့်မရဲဖြစ်နေရတာ ကြာပြီ။ ဒါကို မြတ်နိုးလဲ သတိထားမိသည်။ ခုတော့ ရုတ်တရက်ကြီး သူမအိပ်ခန်းထဲ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းဝင်ရောက်လာပါပြီကော။
စိန်မြင့်က ဘာမှပြန်မပြောပဲ မြတ်နိူး ၏ကိုယ္လုံး အိအိထွေးထွေးကို ပြန်ပွေ.ပိုက်လိုက်ရင်း သူမ၏ပါးပြင်နှစ်ဖက် ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းနေမိသည်။ ချစ်လွန်းလို.ကြံမိတာပါ…မမနိူး ရယ်….. တွေ.ထိလိုက်ရသော အေတြ.ကြောင့်စိတ်များပို ထ sကလာရသည်။ မလိုချင်ဘူး…မင်း ငါ့အခန်းထဲကအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါ..ထြက္ကြာ… တကယ်ဘဲ ရက်စက်တော့မှာလား…မ မနိူး ရယ်…..ကျွန်တော့်မှာတော့ချစ်လိုက်ရတာ၊ ကျွန်တော့်ကိုပြန်ချစ်ပါလား မမ ရယ် နော်… မင်း ပြောလေကဲလေပါလား…မချစ်နိူ င်ဘူး… လွှတ် ငါ့ကိုလွှတ်…… မြတ်နိူး သည်ရုန်းကန်ရင်း အားယူနေသလို စိန်မြင့် ကလည်း သူ၏ထွားကြိုင်းသော ကိုယ်လုံးဖြင့် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းဖိကာဖက်ထားသည်။
စိန်မြင့် သည်ကြောက်လွန်းသဖြင့် တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော မြတ်နိူး ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် အတင်းဖိ ကပ်ကာ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဖလူး…ဖူး…အူး အူး မြတ်နိူး အတင်းပင်ရု န်ကန်ပါသော်လည်း မရေတာ့ပါ၊ စိန်မြင့် နှုတ်ခမ်းစုပ်အား ထက် အဆပေါင်းများစွာပိုအားပြင်းသော နှုတ်ခမ်းခြင်းအထိတွင်ပျံ.နှံ.ကူး စက်လာသော အဖိုဓါတ်၏ ဆွဲငင်အားကြောင့် မြတ်နိူး တစ်ယောက် လွတ်ထွက်သွားအောင်မရုန်းနိူင်ဖြစ်ရချေပြီ။ မြတ်နိူး သည် ယခုအသက်အရွယ်ထိ မည်သည့်ယောင်္ကျားတစ်ဦး တစ်ယောက် နှင့် ယခုကဲ့သို. ထိတွေ.ခဲ.ဖူးခြင်းမရှိသော အစိမ်းသက်သက် အရိုင်းသက်သက် ဖြစ်သဖြင့် တဇွတ်ထိုးနိူင်သော စိန် မြင့် ၏အပြုအမူများကြောင့် သူမ ၏တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း တခဏအတွင်းမှာပင် ဖိန်းတိန်းတိန်း ရှိန်းတိန်းတိန်းဖြစ်လာလေ သည်။ သူမ ၏ နှုတ်ခမ်းပါးလေးအစုံကို ငုံခဲကာထားသော စိန်မြင့် ဆိုသောကောင်လေးသည်လည်း ခေသူမဟုတ်ချေ။
သူမ ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံခဲကာစုပ်နမ်းခံနေရသဖြင့် မချိမဆန့် ခံစားနေရသော မြတ်နိုး ၏ကျောပြင်လေးကို သူ၏လက္တစ္ဖက္က လျှော တိုက်ပွတ်ပေးနေရင်းက မြတ်နိူး ဝတျထားသော ဘလောက်စ် အင်္ကျီလေး၏ နောက်ဖက်တွင်ရှိသော နှိပ်စေ့ကျယ်သီးများကို တွန်းဖြုတ်ချနေရာ မကြာမှီတွင်ပင် မြတ်နိူး ၏ကျောပြင် ပြန်.ပြန်.ဝငျးဝငျးလေးမှ အပြောင်သားဖြစ်သွားရလေသည်။ ယခုအချိန် ထိ သူမ ၏ကျောပြင်တစ်ခုလုံး ဗလာကျင်း သွားရသည်ကို မြတ်နိူး သတိထားမိပုံမရေသး။ သို.ရာတွင် သူမ၏ ကျောပြင်လေးပေါ် သို. စိန်မြင့် ၏လက္ဖဝါးက ရွရွလေး ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သောအခါတွင်တော့ မြတ်နိူး တတွန်.တွန်.ဖြစ်ကာသွားလေသည်။ မြတ်နိူး ၏ နှာခေါင်းဝမှ ထွက်လာသော အသက်ရှုသံများကား ပြင်းထန်နေသည်။ ဝငျလေ ထွက်လေ မ်ားက တရှုးရှုးဖြင့် စိန်မြင့် ၏မျက်နှာ ကို လာရိုက်ခတ်နေသည်။
စိန်မြင့်၏လက်က သူမ ၏ကျောပြင်လေးကို အသားချင်းထိကာ တရွရွဖြင့်ပွတ်သပ်နေပြီးမှ ဖေါင်းအိ သော သူမ ၏ တင်သားကြီးတစ်ဖက်ဆီသို.လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားကာ တင်သားကြီးနှစ်လုံးကို တဖွဖွဆုပ်နယ်ကာပေးနေသည်။ ကုတင်ပေါ်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားဖြင့် စောင်းလျက်သားဖြစ်နေကြရာမှ မြတ်နိူး ၏ခြေနှစ်ချောင်း အနက် အပေါ်ဖက်သို.ရောကနေသော ဒူးဆစ်လေးက ခပ်ကွေးကွေးလေးဖြစ်သွားသဖြင့် စိန်မြင့် ၏ပေါင်ဖျားဆီသို.တင်ကာလာ သည်။ သည်အခါတွင်တော့ သူမ ၏ဖင်သားကြီး နှစ်ခြမ်းမှ ခပ်ဟဟ လေးဖြစ်သွားသည်။ စိန်မြင့် သည် ထိုကွဲဟသွားသော ဖင်သား နှစ်ခြမ်း၏ အသားနုနု နေရာများကို ထမီပေါ်မှပင် ဖိပြီးပွတ်ပေးလေသည်။
မြတ်နိူး သည် ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးပြီဖြစ်သဖြင့် အတွင်းမှ ဘာအခုအခံ မွ ဝတျမထားသောကွောငျ့ မြတ်နိူး ၏အသားစိုင်စိုင် နုနုများသည် စိန်မြင့် ၏လက်ဖဝါးဒဏ် ကို ခံလိုက်ရလေ သည်။ မြတ်နိူး သည်ရင်ထဲတွင် ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ခံစားလိုက်ရသဖြင့် သူမ ၏ခပ်ကွေးကွေးလုပ်ထားပြီး စိန်မြင့် ၏ပေါင်ပေါ်တွင် တင်ထားသော ဒူးဆစ်သည် ရှေ.သို.ပိုတိုးသွားပြီး သူမ ၏ပေါင်တစ်ဖက်က စိန်မြင့် ၏ပေါင်ပေါ်တွင် ခြမိရက်သား ဖြစ်သွားလေ သည်။ စိန်မြင့် သည်မြတ်နိူး ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို စုပ်နမ်းနေရာမှ sပတ် ကနဲမြည်အောင်
ပြန်ခွါလိုက်သည်။ မြတ်နိူး သည် မှိတ်ထားသော မ်က္လုံးတစ္စုံကို ပြန်မဖွင့်နိူင်သေးပဲ ရင်အစုံမှာ နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြင့် မောဟိုက်နေ ရှာသည်။ စိန်မြင့် သည် အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ပဲ မြတ်နိူး ၏လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးရှိ ဖေါင်းကာထနေသောသွေးကြောမကြီးရှိရာ သို. သူ၏နှုတ်ခမ်းအား ဖြတ် ကနဲဖိကပ္ကာ တအားပင် စုပ်နမ်းလိုက်လေသည်။ အင့်…အို……အင်း….ကျွတ် ကျွတ်……. မြတ်နိူး ၏မေးဖျားလေး မွာ မော့တက်သွားပြီး သူမ ၏မျက်နှာလေးမှာ ရှုံ.မဲ့ကာသွားလေသည်။ မြတ်နိူး ၏ နှုတ်ခမ်းပါးလေးများမှာ အပျိုစင်ဖြစ်ပြီး အေတြ.အကြုံ မရှိသောကြောင့်ထင်…တဆတ်ဆတ် တုန်ယင်ကာနေရှာသည်။ နောက်ဆုံးမတော့ မြတ်နိူး အိ နြေ္ဒမဆည်နိူင်တော့ပါ၊
အရှက်သိက္ခာကြီးသော မြတ်နိူး တစ်ယောက် သူမ ၏လက္တစ္ဖက္က စိန်မြင့် ၏ လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်မိ တော့သည်။ပြီးတော့ စိန်မြင့် ၏ပေါင်ပေါ်တွင် ခွထားသော သူမ ၏ပေါင်တံ သည် စိန်မြင့် ၏ပေါင်ကို အတင်းပင်ဖိကပ်ပေး နေသည်။ စိန်မြင့်ကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်လေတော့သည်။ စိန် မြင့် ၏လက်သည် မြတ်နိူး ၏ ကိုယ်နှင့် အိပ်ယာကြားမှ ထိုးသွင်းကာ မြတ်နိူး ၏ဘော်လီ က်ယ်သီးမ်ားကို ခဲရာခဲဆစ်ရအောင် ဖြုတ်ပေးနေသည်။သူ၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးများမှာကား မြတ်နိူး ၏လည်တိုင်လေးကို ငုံခဲလျက်ပင်ရှိသေးသည်။ ဘော်လီ ကျယ် သီးများကိုဖြုတ်ပြီးသွားသည့်အခါတွင် စိန်မြင့်သည် သူ၏လက်များဖြင့် တင်းကားအယ်နေသော မြတ်နိူး ၏ဖင်သာကြီးများကို စိတ်ကြိုက်ဆုပ်နယ်သုံးသပ်ပေး လေသည်။
ထို.နောက် သူမ၏ ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကိုလျောတိုက်ပေးနေသော စိန်မြင့် ၏လက်သည် မြတ်နိူး ၏ပေါင်ရင်းနှစ်လုံးကြားရှေ.ဖက် သို. တိုးဝင်ကာ ထမီပိတ္စ ပါးပါးလေးပေါ်မှ နေပြီး မုန့်ပေါင်းဖိုမှ ခ်ခါစကဲသို. ပူနွေးကာဖေါင်းအိနူးညံ့ လေသော မြတ်နိူး ၏အဖုတ် ကို နှိုက်လေတော့သည်။ ထိုအခါတွင် မြတ်နိူး ၏ကျင်သောခါးသေးသေးလေးသည် ဆတ်ကနဲကော့ကာတက်သွားရာ စိန်မြင့် ၏ပုဆိုးတွင်းမှ မာတောင်နေပူနွေးနေသော လီးကြီး၏ထိပ်က သူမ ၏ဆီးစပ္ကို ထောက်လိုက်မိသည်။ သူမ ၏ဆီးစပ္ကေလး တင်း ကနဲဖြစ်သွားသဖြင့် တဖန်ပြန်ကာ သူမ၏ဖင်သားများကိုနောက်သို.ဆုတ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါတွင် စိန်မြင့် သည် အဖုတ် နှိုက် သောသူ၏လက်များကို မြတ်နိူး ၏ဖင်သားအကွဲကြားများမှတဖန် သူမ ၏ စအိုဝ ကို ထမီပေါ်မှနေပြီးကလိပေးပြန်သည်။ မြတ်နိူး တစ်ယောက် ရှေ.တို.လည်း တံပိုး နောက်ဆုတ်လည်း ဝငျရိုး ကဲ့သို.ဖြစ်နေရပြီး အနေခက်နေရသည်။
ဘဝတစ်သက်တာတွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမခံစားဖူးသေးသည့် အေတြ.အထိများကြောင့် ဆရာမ မျမတ္နိူး ခမ်ာ စိန်မြင့် ၏ အနမ်း အစုတ်၊ အပွတ်အသပ်၊ အချော့အမြူ များကြားတွင် တစ်ကိုယ်လုံးပျော့ခွေကာသွားချေပြီ။ မကြာလိုက်ပါ။ စိန်မြင့် ၏လက်မောင်းကို ခပ်ဖွဖွဆုပ်ကိုင်ထားသော သူမ၏လက်သည် စိန်မြင့် ၏ကိုယ်လုံးအားတအားကြုံးကာဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်မှ လည်း တအင်းအင်း ဖြင့် တီးတိုးညီးညူနေလေသည်။ ထိုကဲ့သို.မြတ်နိူး တစ်ယောက်စိတ်များစိန်မြင့် ကေတာ့ မြတ်နိူး ကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကာနေသည်။ သူမ သည် မ်က္လုံးမ်ားကို မဖွင့်နိူင်ရှာသေးပဲ အသက္ကို မြှင်းမြှင်းလေးရှုကာ ရင်ဘတ်များကား နိမ့်တုံ မြင့်တုံ ဖြစ်နေလေသည်။
မမနိုး…ကျွန်တော့်ကိုချစ်ခွင့်ပြုပါတော့နော်….. စိန်မြင့် ၏မျှော်လင့်ချက်အပြည့်ပါသော ရမ္မက်ခိုးများတက်နေသည့် မ်က္လုံးမ်ား နှင့်ကြည့်ပြီး မြတ်နိူး အားခွင့်ပန်လိုက်သည်။ ခ်စ္လို့… ရှိယင်လည်း…ရိုးရိုး…ချစ်ပါလား…ခု မင်းဟာက…..ဟင်း မပြေသေးသည့် အမောသံလေးဖြင့် မြတ်နိူး ကပြန်ပြောလိုက်လေသည်။ သူမ သည် ထိုစကားကို ပြောသာပြောရသော်ညလည်း စိတ်အတွင်းမှ လှိုင်းတံပိုးပမာ တလှိမ့်လှိမ့် တက်ကာလာနေသော အာသာရမ္မက်စိတ်များကို ဖျေဖြောက်နိူင်ခြင်းငှာ မစွမ်းဆောင်နိူင်သေး။
လူကြီးတွေ နိူးကုန်ရင် မကောင်းပါဘူးကွယ်…ပြန်ပါတော့ မောင်လေးရယ်..မင်းအချစ်ကို နောက်မှလက်ခံပါရစေနော်….. ဟာ…မ မနိူး ကလည်း…အခ်စ္ဆိုတာ အချိန်ဆွဲလို. ရတာမွမဟုတ္တာ…. ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် စိန်မြင့် သည်ရှေ့သို့တိုးကာ မြတ်နိူး ၏ကိုယ်လုံး လေးကိုဖက်လိုက်လေသည်။ မလုပ်ပါနဲ. မောင်လေးရယ်…မမ တောင်းပန်ပါတယ်…နော်… မမနိူး ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မချစ် ရရင် ကျွန်တော်မပြန်ဘူး… ထိုသို့ပြောရင်း စိန်မြင့် သည် မြတ်နိူး၏ဘလောက်စ် အင်္ကျီကို လက်ဖြင့်ဆွဲကိုင်ကာ လည်ပင်းနား ရောက်သည်အထိ ဆွဲလှန်လိုက်လေသည်။
ဘလောက်စ် အင်္ကျီသည် ကျောဖက်မှကျယ်သီးအားလုံးပြုတ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် အလွယ်တကူလန်တက်သွားပြီး မို.ဖေါင်းနေသော ဘော်လီ အင်္ကျီဖွေးဖွေးကိုမြင်လိုက်ရလေသည်။ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခြင်း မပြုဘဲ မြတ်နိူး က အို..အို..မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာ ကွယ်…မင်းကလည်း…. သူမ စကားမဆုံးမှီမှာပင် စိန်မြင့် က မြတ်နိူး ၏ ဘော်လီအင်္ကျီကို အပေါ်လှန်တင်လိုက်ရာ သူမ ၏ဘော်လီ သည် နောက်ဖက်မှကျယ်သီး အားလုံးကို ဖြုတ်ထားပြီးပြီ ဖြစ်သည့်အလျောက် လက်သီးဆုတ်ခန့်ရှိသော မြတ်နိူး ၏ ရင်သားနှစ်ဖက်မှာ ချက်ချင်း ဆိုသလိုပင် စိန်မြင့် ၏ မျက်နှာ ကသူမ၏ ရင်သားများဆီသို.ရောက်သွားပြီး ချွန်နေသော စိန်မြင့် ၏ နှာခေါင်းက ရင်သားနှစ်မွှာကြားသို့ တိုးဝင် ဖိကပ်ကာနမ်းလေသည်။
စိန်မြင့် သည် ခပ်ကြာကြာလေး ဖိကပ်ကာနမ်းလိုက်သောအခါ ကလယ်ကလယ် ဖြစ်နေသော သူမ၏မ်က္လုံးမ်ား သည် လေးလံစွာ ဖြင့် မှေးစင်းကာကျသွားလေသည်။သွယ်ပျောင်းသော သူမ၏လက်တစ်ဖက်သည် ယခုဆိုလျှင် စိန်မြင့် ၏လည်ဂုတ်ကိုပြန်လည် ကာသိုင်းဖက်ပေး နေမိတော့သည်။ ထိုအခါတွင်မှ စိန်မြင့် ကသူ၏ နှာခေါင်း ကိုသူမ၏ နို့နှစ်လုံးကြားမှ အနည်းငယ်ကြွလိုက် သည်။ အို…အို..ဟင်း ခံစားနေရသော အရသာ ပြတ်တောက်သွားသဖြင့် မြတ်နိုးထံမှ အလိုမကျသံလေးထွက်လာရ၏။ ပြီးတော့မှ စိန်မြင့် က သူ၏မျက်နှာကို နည်းနည်းစောင်းကာ မြတ်နိုး၏ နို့သီးခေါင်းလေးတဖက်ကို လျှာနှင့်ယက်လိုက်လေသည်။ အေမ့… အင်း…..အို….ဟာ… မြတ်နိူး တစ်ကိုယ်လုံးထွန့်ထွန့်လူးသွားရင်း သူမ၏ နောက်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် စိန်မြင့် ၏ကျောပြင်ကို သိုင်း ဖက်လိုက်မိတော့သည်။ စိန်မြင့် သည် တစ်ဖက်မှ နို့သီးကိုယက်ပြီးသောအခါ အခြားနို့အုံမှ နို့သီးကိုနှုတ်ခမ်းဖြင့် ငုံကာစုပ် ပေးလိုက်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေလေသည်။
အို…ဟင်း…အ….ကျွတ်ကျွတ်…. မောင်…မောင်….လေး.. ဟင့်…. မြတ်နိူး ထိုကဲ့သို. အသံများထွက်လာသည့်အပြင် သူမ၏ကျော ပြင်သည် အိပ်ယာပေါ်မှ ကော့တက်လာသဖြင့် စိန်မြင့်၏ ပါးစပ်တွင်းသို.ဖိကပ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားလေသည်။စိန်မြင့်ကား အားပါးတရစို့ပေးနေလေပြီ၊ စိန်မြင့် စို့ပေးလေ မြတ်နိူး ပေါင်လုံးကြီး နှစ်လုံးမှာတဖြည်းဖြည်းပိုကားလေ ဖြစ်လာသည်။ စိန်မြင့် သည် ပြေလျော့နေပြီဖြစ်သော ထဘီကို မြတ်နိူး ၏ခါးမွ အသာဆြဲကာ ချွတ်လိုက်သောအခါ ထဘီသည် သူမ၏ဒူးဆစ်နား လောက်သို့ရောက်သွားလေသည်။
အိနြေ္ဒရှင်ဆရာမ၏ အဖုတ်လေးကိုကြည့်ချင်လှပြီဖြစ်သော်လည်း နို့စို့ပေးနေရသောကြောင့် စိန်မြင့် သည်မကြည့်အားသေး ချေ။ ထို့ကြောင့် စိန်မြင့် သည် သူ၏လက်တစ်ဖက်ဖြင့် မြတ်နိူး ၏ ပူနွေးဖေါင်း မြတ်နိူး သည်တစ်ခါဘူးမှ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နှင့် ထိ တွေ.ခဲ့ဖူခြင်း မရွိပဲ၊ အခုမွ နဖူးတွေ. ဒူးတွေ. ထိတွေ.လိုက်ရသဖြင့် သူမ ၏ကာမစိတ်များမှာ ဘယ်လိုမှထိန်းမနိူင်တော့ပဲ ဖြစ်ချင် ရာဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အေတြ.အကြုံ ရှိသင့်သလောက်ရှိနေသော စိန်မြင့် ကေတာ့ မြတ်နိူး မွာ နှာထန်သော မိန်းမစားထဲ တွင်ပါကြောင်း သတိပြုမိလိုက်သည်။
စိန်မြင့်၏လက်ဖဝါးက မြတ်နိူး၏စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကိုအုပ်ပြီးကိုင် ကာ ဖွဖွလေးဆုပ်လိုက်ညှစ်လိုက်လုပ်ပေးနေသည်။ မောင်…လေး…ဟင့် ခုချိန်ထိ စိန်မြင့်က မြတ်နိူး ၏ နို့တွေကို အလွတ်မပေးသေးဘဲ စိမ်ပြေနပြေစို့လျက်ရှိသည်။ စိန်မြင့် သည် ထိ တွေ့ကိုင်ရသည်မှာ အလွန်အရသာရှိလှသော မြတ်နိူး ၏စောက်ပတ်ကြီးကိုဆက်ကာပွတ်သပ် ပေးနေလေသည်။ ပြီးတော့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဖြဖြေလး တရွရွ ပွတ်သပ်ပေးနေပြီး သူ၏လက်ညှိုးကို သူမ၏ အခေါင်းဝသို့ လက်တစ်ဆစ်ခန့် ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ၏လက်ညှိုးကို စောက်ပတ်ဝတွင် ညင်ညင်သာသာလေး လှည့်ပတ်မွှေပေးနေသည်။ ထို့ပြင် လည်း သူမ၏ နို့ကို ဖိကာစို့နေပြီး လျှာဖြင့် ယက်ပေးနေလေသည်။
အ…ကျွတ်ကျွတ်…ဟင့်… အို…မောင်လေးရယ်.. မမ ကို အသေသတ်နေတာလား…ဟင် ထိုသို့ မြတ်နိူး ၏နှာတွန်သံများကို ကြားလိုက်သောအခါ စိန်မြင့် သည် သူ၏ တစ္ကိုယ္လုံးကို မြတ်နိူး ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကြွကာထထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မြတ်နိူး၏ ဒူးဆစ်ပေါ်မှ ထမီကိုချွတ်လိုက်ကာ တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုပင် သူ၏ အဝတ်အစားများကိုလည်း ချွတ်လိုက်လေသည်။ စိန်မြင့် က သူမ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုပါ ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ချေမွှနေ သဖြင့် သူမမွာ တစ္ကိုယ္လုံး ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်ဖြစ်လာပြီး ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးမှာလည်း လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာရလေသည်။ မောင် လေး…မမ ကို နှိပ်စက်နေတာလားကွယ်… ချစ်ပါရစေတော့နော်…မမ ဒီလိုအချိန်ရောက်နေမှတော့ မထူးတော့ပါဘူး…မင်းသဘော အတိုင်းပါပဲကွယ်…
စိန်မြင့် လည်းအကြိုက်တွေ့သွားပြီး သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကို ထပ်မံကဆွဲကားလိုက်ပြီး အရည်အရွှဲသားနှင့် မြ တ်နိူး ၏အာနေသော အခေါင်းနီနီရဲရဲအတွင်းသို. သူ၏လီးကြီးကိုတအားဆောင့်လိုက်ရာ အမေလး…ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်…နာလိုက် တာ မောင်လေး ရယ်… တစ်ခါမှ အလိုးမခံဘူးသော မြတ်နိူး သူမ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ စိန်မြင့် ၏ လီးတန်ကြီးက မညွာမ တာ ဝငျသှားဖွငျ့ အော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိန်မြင့် ကေတာ့ သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ကုန်းကာစို့ပေးနေဆဲ။ မြတ်နိူး သည် သူမ၏လည်ပင်းနားထိတင်ကာလန်နေသော သူမ၏ ဘလောက်စ်အင်္ကျီနှင့် ဘော်လီ တို့ကိုအပြီးတိုင်ဆွဲကာ ချွတ်လိုက်လေ သည်။ စိန်မြင့်သည် အတန်ကြာအောင် နို့စို့ပေးလိုက်သောအခါ မြတ်နိူး သည် သိသိသာသာပင် ခါးကော့ကာတက်လာပြီး စိန်မြင့် ၏ ကျောပြင်အားပွတ်သပ်ပေးနေသည်။
မမနိူး.. ဘာလဲ ဟင်… မောင်လေး… ကျွန်တော် စိတ်ရှိသလောက် ချစ်ပါရစေလား….. ချစ်…ချစ်… မင်းကြိုက်သလိုချစ်စမ်း… မြ တ်နိူး သည် စိတ်တွေအတော်ထလာပြီဖြစ်သဖြင့် သူမ၏ဆန္ဒကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်သည်တွင် စိန်မြင့် ကလည်း သူမ၏ ဂျိုင်းကြား အောက်မှ လက်လျှိုသွင်းပြီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်လျက် အားပါးတရ ဆောင့်လိုးလေတော့သည်။ ဘွပ်…. စြိစြိ… စွပ်စွပ်… sပတ်…. အမေလး လေး…. အားပါးပါး.. ဖြေးဖြေး… ဖြေးဖြေးလုပ်ပါမောင်လေး ရယ်…… မမ ပဲ လုပ်တော့…. ကြိုက်သလို ချစ် တော့ဆို……. သြော်ကွယ် မောင်လေးကလည်း…. လုပ်နိူင်ပြီဆိုတာနဲ့ မင်းကတအားဆောင့်တာကိုး…. မမ မွာ တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိတော့ နာလည်းနာ အောင့်လည်းအောင့်တယ်ကွယ့်…. မြတ်နိူး ကပြောလိုက်သဖြင့် စိန်မြင့် သည် သူမ၏စောက် ခေါင်းထဲသို. အရမ်းပစ်သွင်းနေသော လီးကြီးကို အရွိန်သတ္လိုက္ကာ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန်လေးဆောင့်ပေးနေလိုက်သည်။
အဲဒီလို ဆိုတော်သေးတာပေါ့.. မောင်လေး ရယ်.. ခုနကအတုင်းဆို မမ ဟာလေး ကွဲတော့မယ့်အတိုင်းပဲ အဲဒီ့လောက်လည်း မဟုတ် သေးပါဘူး မမ ရယ်.. ဘာလို့မဟုတ်ရမှာလည်း.. မင်းဟာကြီးက နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး.. ထိုသို့ စိန်မြင့် ကတစ်ချက်ခြင်း ဆောင့်နေလေရာ မြတ်နိူး မှာကောင်းလာသဖြင့် သူမ၏တင်ပါးကြီးများကို ကော့ကော့ပေးလာပြီး စိန်မြင့် ၏ လည်ပင်းအား သိုင်း ဖက်လျက် ရမ္မက်ပြင်းသောမျက်လုံးအစုံဖြင့် မောင်လေး.. ဘာလဲ ဟင်…မမ မင်းစိတ်ရှိသလောက်လုပ်တော့ကွယ်… မမ မနေနိူ င်အောင်ယားတက်လာပြီ.. မြတ်နိူး ကထိုသို့ပြောလိုက်သောအခါတွင်မတော့ စိန်မြင့် သည် မြတ်နိူး ၏ပေါင်တံနှစ်သွယ်အား သူ၏ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်ပြီး အားပါးတရပင် ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ကာလိုးလေတော့သည်။
ဘွတ်ဘွတ်..ပြွတ်…စွပ်…ဗျိ.. ဟင်း ဟင်း ဟင်….. ကောင်းလှချည်လား…မောင်..လေး..ရယ်… အချက်နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက် ဆက်တိုက်အားပါးတရဆောင့်ပြီးသွားသောအခါ စိန်မြင့် သည် မြတ်နိူး ၏ ကိုယ်ပေါ်မှောက်ကာ ခဏနားလိုက်သည်။ ကောင်းရဲ့ လားဟင်…မမ.. ဘာကောင်းတာလဲ..မသိဘူး.. မြတ်နိူး ကမူတူတူ မျက်နှာပေးဖြင့် စိန်မြင့် အားမျက်စောင်းထိုးလိုက်လေသည်။ ခုနကေတာ့ ကောင်းလှချည်ရဲ့ဆို… မဆိုငျပါဘူး… ကဲပါ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး… စကားကလညျးမြားလိုကျတာ.. စိန်မြင့် သည်သူ၏လိင်တန်ကြီးအား မြတ်နိူး ၏အခေါင်းထဲတွင် စိမ်လျက် စကားလည်းပြောရင်း တလှုပ်လှုပ်ဖြင့်လိုးပေး နေသည်။
သို.သော မြတ်နိူး အဖို့မှာကား အရှိန်ကောင်းနေတုန်း စိန်မြင့် ကမရိုးမရွဖြစ်အောင်လုပ်နေသည့်အတွက် ကာမဇောများ ပိုတက်လာပြီး သူမ ၏ဖင်ကြီးများမှာလည်း အငြိမ်မနေနိူင်အောင်ပင်ဖြစ်လာရသဖြင့် စိန်မြင့် အားဆက်ပြီးလိုးပေးရန် တိုက်တွန်း လိုက်လေသည်။ မြတ်နိူး ကထိုသို့ပြောလိုက်ပြီးနောက် စိန်မြင့် သည် သူ၏ကိုယ္ကို မြတ်နိူးပေါ်မှထကာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အနေအထားသို့ပြောင်းလိုက်လေသည်။ သို့သော် မြတ်နိူး ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့တစ်ဆုံးသွင်းထားသော သူ၏လီးတန်ကြီးကို ကား ဆောင့်လိုးရန်အတွက် ပြန်ပြီးဆွဲမထုတ်သေးပဲ ဒီအတိုင်းပင် စိမ်ကာထားလိုက်သည်။ သူ၏မ်က္လုံးမ်ားကေတာ့ မြတ်နိူး ၏စောက်ပတ်ကြီးကို ငုံ့ကာကြည့်နေလေသည်။
မြတ်နိူး ၏စောက်ပတ်ကြီးမှာ နဂိုကတည်းက မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်း ရှိရသည့်အထဲ စိန်မြင့် ၏တုတ်ခဲသော လိင်တန်ကြီး ထိုးသွင်းထား သောကြောင့် အဆမတန်ဖေါင်းကားကာနေလေသည်။ စိန်မြင့် သည် ထိုဖေါင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးအား သူ၏လက်ဖဝါး ဖြင့်အုပ်ကာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ မြတ်နိူး မွာ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်ဖြစ်သွားလေသည်။ အိုကွယ်..လုပ်မှာဖြင့်လည်း လုပ်တော့လေ မောင်လေးရယ်.. မမ ကို မညှင်းဆဲပါနဲ့တော့နော်.. မမ တောင်းပန်ပါတယ်.. ဟင်း ဟင်း ဟင်း… မြတ်နိူး မွာ အစွမ်းကုန်ဖြစ် နေပြီး သနားစဖွယ်တောင်းခံလာသောအခါတွင် စိန်မြင့် သည် သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးသွင်းထားသော သူ၏လီးချောင်း ကြီးကို ဖြည်းဖြည်းလေးမှ တကယ့်ကို ဖြည်းဖြည်းလေး ဆွဲထုတ်လိုက်လေသည်။ မြတ်နိူး ၏ ပါးစပ်လေးသည် တဖြည်းဖြည်း ဟ ကာသွားလေသည်။
စိန်မြင့် သည်ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်နေရာ လီးကြီး ဒစ်ပေါ်လာသောအခါတွင် ဆက်ကာဆွဲမထုတ်တော့ပဲ ရပ်လိုက်သည်။ မြတ်နိူး ကလည်း စိန်မြင့် သည် သူ၏လီးကြီးကို သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ ပြန်ဆောင့်ကာထည့်တော့မည်ဟု တွက်လျက် ပေါင်ကြောများကိုတောင့်လျက် စောက်ဖုတ်မျက်နှာပြင်များကိုတင်းလိုက်ကာ မျက်စိစုံမှတ်ပြီးစောင့်နေလေသည်။ စိန်မြင့် သည် သူ၏လီးချောင်းကိုပြန်ကာဆောင့်မသွင်းသေးဘဲ သူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မာတင်းကာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေ သော မြတ်နိူး ၏နို့သီးလေးနှစ်လုံးကို သူ၏လက်ဖဝါးထဲထည့်ကာ လှိမ့်ချေပေးနေသည်။ တော်တော်ကြာသည်အထိ သူမ၏ အခေါင်းထဲသို့ မျှော်လင့်စောင့်စားနေသော စိန်မြင့် ၏ အတန်ကထိုးဝင်လာခြင်းမရှိသဖြင့် မြတ်နိူး သည် စိတ်မောစွာ သက်ပျင်း တစ်ချက်ချလိုက်ပြီး စိတ်ကိုလျော့ကာ သူမ ၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ကာ ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအခါတွင်မှ စိန်မြင့် သည် သူ၏လီး ကြီးကို မြတ်နိူး ၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ တရွိန္ထိုး ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။
ဗြိ… ဘွပ်… ပလွတ် ပလွတ်… စွပ်..ဘုန်း… အမလေး… အား ဟား… ဖွင့်လိုက်မိသော မြတ်နိူး ၏မျက်လုံးအစုံသည် ချက်ချင်းပင် ပြန်မှိတ်ကာသွားပြီး သူမ၏ ခါးလေးသည်လည်းကော့တက်ကာသွားပြီး အော်ဟစ်ကာသည်းတွားလိုက်သည်။ စိတ်ကိုလျော့ကာ တစ်ကိုယ်လုံးကိုပြန်ပြီးပျော့လိုက်သောအချိန်တွင် စိန်မြင့် ၏လီးတန်ကြီးသည် မြတ်နိူး ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ ဂမူးရှုးထိုးဝင် သွားပြီး သားအိမ်ဝကိုတရှိန်ထိုးထောက်မိလေသောကြောင့် မြတ်နိူး မှာအသံပေါင်းစုံထွက်သွားပြီး ဘုန်း ကနဲနေအောင် သူမ ၏ဖင်ကြီးကို မွှေ့ယာထက်သို့ဆောင့်ချလိုက်မိသည်။ ထို့ပြင် ထိုလီးချောင်းကြီးသည် ဆောင့်မလိုးတော့ပဲ ဆက်လက်ဖိကပ်ထား ပြီး အပြည့်အသိပ်ဖြစ်နေကာ စကောဝိုင်း သကဲ့သို့လုပ်ပေးနေသည်။ အမေလး.. ဟင်း ဟင်း… မောင်လေး ရယ်… ကောင်းလား ဟင်… မမ အင်း..ကောင်း..ကောင်းတယ်…ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်… ချစ်ကော ခ်စ္လား ဟင်… ချစ်ပါတယ်ကွယ်…လုပ် လုပ်… ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ အများကြီး..ကျွတ် ကျွတ်..အ မ်ား ကြီးပဲ… အင့် အင့်…လုပ်ပါတော့ကွယ်… မင်းကို မမ သိပ်… ချစ်ပါတယ်.. ပထမ ဆောင့်ကာလိုးထားသည့် အရွိန္ကလဲရွိ စောက်ရည်တွေကလည်းမတရားထွက်နေ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ပြည့်ကျပ်နေပြီး ဖိသိပ္ကာ စကောဝိုင်းပေးနေသောကြောင့် မြတ်နိူး ၏ခံချင်စိတ်များမှာ ဆည်ကျိုးသကဲ့သို့ တဟုန်ထိုးမရပ်နိူင် အောင်ဖြစ်လာတော့သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း စိန်မြင့် ကို တတွင်တွင်သာလုပ်ခိုင်းနေသည်။ ဘာလုပ်ရမှာလဲ.. မမ ရဲ့… လိုးရမွာလား.. အင်း… ဟုတ်… ဟုတ် တယ်… ပြောလေ မမ ရဲ့… ဘာဟုတ္တာလဲ… ဟို…ဟို.. မမ ကို လိုးပေးပါကွယ်… လိုးပါတော့… လိုးပေးပါတော့… ဟင်း.. နောက်နေ့ ကျရင် ကျွန်တော် လာလိုးရင်ကော ခံမလား… ခံ…ခံပါ့မယ်… ဘာခံမှာလဲ.. အို..ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ…မင်းလိုးတာကို…မမ ခံ ပါ့မယ်..ခံပါ့မယ်.. စိတ္ခ်ပါ…ခု မမ ကိုလိုးပေးပါတော့ကွယ်.. နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်လိုးရင် မမ ဖင်ကုန်းပြီး အလိုးခံရမယ်..ဘယ် နဲ့လဲဖြစ်မလား… ဖြစ်တယ်…အင်း.ဟင်း..ဟင်း.. မင်းလိုးတာကို မမ ဖင်ကုန်းပြီးခံပါ့မယ်… မင်းကြိုက်သလိုသာ မမ ကိုလိုးစမ်း ပါ.. အမေလး ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်… အင်း မေးတာကို ပြန်ဖြေရင်းနှင့် မြတ်နိူး တစ်ယောက် တစ္တစ္ခြခြ ပြောရတာကို အကြိုက်တွေ့ လာသည်။ စကားလည်းဆုံးရော စိန်မြင့် သည် သူ၏လီးကြီးကိုတစ်ချက်ချင်း လေးလေးပင်ပင် ဆောင့်ကာလိုးလေ သည်။
သုံးလေးချက်မျှသာဆောင့်ရ အပိုင်း(2) အင်း.ဟင်း..ဟင်း.. မင်းလိုးတာကို မမ ဖင်ကုန်းပြီးခံပါ့မယ်… မင်းကြိုက်သလိုသာ မမ ကိုလိုးစမ်းပါ.. အမေလး ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်… အင်း မေးတာကို ပြန်ဖြေရင်းနှင့် မြတ်နိူး တစ်ယောက် တစ္တစ္ခြခြ ပြောရတာကို အကြိုက်တွေ့ လာသည်။ စကားလည်းဆုံးရော စိန်မြင့် သည် သူ၏လီးကြီးကိုတစ်ချက်ချင်း လေးလေးပင်ပင် ဆောင့်ကာလိုးလေ သည်။ သုံးလေးချက်မျှသာဆောင့်ရုံရှိသေးသည် မောင်လေး….. မောင်လေး….. တအားဆောင့်ပြီးလိုးပေးစမ်းပါ….. ဆောင့်…… ဆောင့်ပါ မောင်လေး ရယ်…. ဘွပ်…..ပြွတ်…..ပြွတ်…ဘွပ်….. ဟုတ္ပီ မောင်လေး ရယ်… အဲဒီလိုမျိုးဆောင့်ပါ….အား…..အင်း… စိန်မြင့် ကသူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မြတ်နိူး ၏နို့နှစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်ကာ အားပါးတရဆောင့်ကာ လိုးလေတော့သည်။ မြတ်နိူး က လည်း သူမ၏ ဖင်ကြီးတွေကို အိပ်ယာပေါ်မှ ကြွတက်လာသည်အထိ ကော့ကော့ပြီး အားပါးတရအလိုးခံလေသည်။ ခဏကြာ သောအခါ တစ်ကိုယ်လုံးအီဆိမ့်ကာတက်လာသော စိန်မြင့် သည် သူ၏လီးချောင်းကို မြတ်နိူး ၏စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ တစ္ဆုံး နီးပါးဆွဲကာဆွဲကာထုတ်ပြီး ဆောင့်ပါလေတော့သည်။
ပြွတ်…..ဘွပ်…… ပလွတ်….. ဘွပ်…. အမေလး လေး…. မမ ဘယ်လိုဖြစ်….. အမေလး…..အား အား…အွန်း အွန်း…. အိ.. မ……..မ…… အိုး…… အား မြတ်နိူး တစ်ကိုယ်လုံးမြောက်ကြွကာ ကော့တက်သွားချိန်မှာပင် စိန်မြင့် သည်လည်း ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်လျက် မြတ်နိူး ၏ကိုယ္လုံးဆီသို. သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးမှာ မှောက်ရက်ကျသွားလျက် နှစ်ယောက်သားစလုံး ကာမအထွတ်အထိပ် သို့ ပြိုင်တူရောက်သွားလေတော့သည်။ ဒီည ထွန်းဝင်း နှင့် ချိန်းထားသည့်အတွက် လွလွမိုး ရင်တွေခုန်နေသည်။ ထွန်းဝင်း နှင့် လွလွမိုး တို့ချစ်နေကြသည်မှာ တစ်နှစ် နီးပါးရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပတ်လောက်ကာမှသာ ဆိတ်ကွယ်ရာ နေရာ တွင် ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီး ကာမစပ်ယှက်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ထိုနေ့က အိမ်ရှင်များပြန်ရောက်လာသဖြင့် ထွန်းဝင်း နှင့် လွလွမိုး တို့တစ်ကြိမ်သာလုပ်လိုက်ရပြီး မပြန်ချင်ပြန်ချင်ဖြင့် သူတို့နှစ်ယောက် ချိန်းတွေ့သောအိမ်မှ ပြန်ခဲ့ရလေသည်။
အာသာမပြေသော ထွန်းဝင်း ကနောက်ထပ်တွေ့ရန်ချိန်းသော်လည်း လွလွမိုး သည် မိန်းခလေးပီပီ ကိုထွန်းဝင်းကိုချက်ချင်းကြီးမလိုက်လျော သေးပဲ ရက်အတန်ငယ်ကြာသောအခါမှ ဒီညတွင်အိမ်သို့လာရန်ချိန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ္လို အိမ်ထဲသို့ဝင်လာရမည်ကို လွလွ မိုး က ထွန်းဝင်းအား အေသအခ်ာ ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သည်။ လွလွမိုး သည် ထွန်းဝင်း လာလျှင်အလွယ်တကူအိမ်ထဲသို့ ဝငျလာနိူငျ ရနျအတှကျ အိမ်နောက်ဖေးတံခါးကို စေ့ရုံသာစေ့ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေ့ညမှမီးကပြတ်သွားသည်။ (ဘယ်နှစ်ခု နှစ်က ကစာအုပ်လည်းမသိဘူး၊ မီးပြတ်သွားတာကို အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ထည့်ရေးထားတယ်။ စကားချပ်) လှလှမိုး ပိုပြီး အကြိုက်တွေ့သွားသည်။
လွလွမိုး သည် မှန်ရှေ့သို့သွားကာ အခန်းထဲတွင်ထွန်းထားသော ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် သူမ ၏ကိုယ်လုံး လေးကို လှည့်ပတ်ကာကြည့်နေသည်။ ပြီးနောက် လွလွမိုး သည် သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ အင်္ကျီတွေကိုချွတ်လိုက်ပြီး ထမီကိုရင်လျှား လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ ဖယောင်းတိုင်မီးကို မှုတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်တွင်လှဲနေလိုက်သည်။ လွလွမိုး သည် တစ်ခါကြုံဖူးပြီဖြစ် သဖြင့် ကာမအရသာကိုကောင်းမှန်းသိနေပြီဖြစ်သည်း ယခုလည်း သိပ်မကြာမီမှာပင် ခံစားရတော့မည်ဖြစ်သော အရသာအတွက် ကြိုတင်ကာ ရင်ခုန်နေမိလေသည်။ ထွန်းဝင်း ကလည်း ယခုအချိန်အထိပေါ်မလာသေး၊ စိတ်တွေကလည်း အရမ်းထလာပြီဖြစ် သဖြင့် လွလွမိုး သည် မနေနိူင်မထိုင်နိူင်ဖြစ်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားကိုလက်ထည့်ကာ ရွရွလေးပွတ်ပေးနေမိသည်။
ဟိုတစ်နေ့က မြတ်နိူး ၏ အပျိုရည်ကိုရယူပြီးနောက် နောက်ထပ်တွေ့ကြရန်ထပ်ချိန်းသော အခါတွင် မြတ်နိူး ကဧည့်သည်များ လာမည်ဖြစ်သဖြင့် သုံးရက္ခြါကာ ဒီနေ့ညတွင်လာခဲ့ရန် စိန်မြင့် အားချိန်းလိုက်လေသည်။ အမှန်တကယ်တွင်တော့ မြတ်နိူး သည် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုနေ့ကစိတ်တိုင်းကျပြုမူထားသည်လည်းဖြစ်သည့်အတွက် သူမမွာ နာကျင်ကိုက်ခဲနေမည် ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် သုံးရက်ခြားကာ ချိန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိန်မြင့် သည် နှာထန်ကာအပေးကောင်းသော ဆရာမ မြတ်နိူး ကို နှစ်သက်စွဲလန်းကာ နောက်တစ်ကြိမ်အမြန်တွေ့ချင်နေသည့်အလျောက် စိန်မြင့် သည် မြတ်နိူး တို့အိမ်သို့လှမ်းခဲ့လေသည်။
အိမ်ထဲရောက်တော့ မီးကပျက်နေသဖြင့် စိန်မြင့် သည်စမ်းတဝါးဝါးဖြင့်လာခဲ့ရသည်။ အခန်းထဲသို့ရောက်သောအခါ ကုတင်ရှိ မည်ထင်သောနေရာသို့မှန်းဆကာ ဝငျသှားသညျ။ ကုတင် နှင့် သူ၏ခြေထောက်တို့ တိုက်မိသောအခါ ကုတင်ကို လက်နှင့်စမ်းရင်း တက်ထိုင်လိုက်သည်။ နူးညံ့အိထွေးလှသော ကိုယ်လုံးလေးကိုစမ်းမိသောအခါ စိန်မြင့် သည်သူ၏ပုဆိုးကို ကုတင်အောက်မှာပင် ချွတ်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို လှမ်းဖက်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ စိန်မြင့် သည် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို အငမ်းမရ ပြတ်သပ္ကာ မျက်နှာအနှံ့ တရစပ်နမ်းလေတော့သည်။ စိန်မြင့် ၏လက္က သူမ၏တစ္ကိုယ္လုံး ကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးနေလေတော့ သူမ၏ကိုယ်ပေါ်တွင် ထမီတစ်ထည်သာ ရင်လျှားထားသည်ကို သိရသဖြင့် သူမ၏ထမီကိုဆွဲပြီးချွတ်လိုက်ရာ သူမကလည်း ဝိုင်း ကာချွတ်ပေးသည်။
မြတ်နိူး ၏ပါးတွင် အရင်တစ်ခါနမ်းတုန်းကလို ရှင်မတောင်သနပ်ခါး မရဘဲ မိတ်ကပ်နံ့ရသဖြင့် မမနိူး တစ်ယောက် သူလာမည်ကို သိသဖြင့် မိတ်ကပ်လူးထားပေးသည်ဟုထင်ကာ စိန်မြင့် မွာ သဘောခွေ့သွားလေသည်။ သူမ ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ထမှကျွတ်သွားသည် နှင့် စိန်မြင့် သည်လည်း သူ၏အင်္ကျီကို ကမန်းကတန်းချွတ်လိုက်ပြီး သူမ၏နို့ကို ကုန်းကာစို့လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ လက္တစ္ဖ က္က သူမ၏ပေါင်ကြားထဲသို့ သူ၏လက်ကိုထည့်ကာ စောက်ဖုတ်လေးကိုစုပ်ကိုင်လိုက်လေသည်။ ဟင်…… သူမ ၏စောက်ဖုတ် လေးမှာ အရည်တွေစိမ့်ထွက်နေသည့်အပြင် ဟိုနေ့တုန်းကလို စောက်ဖုတ်ပေါ်ရှိ စောက်မွှေးများမှာ ခပ်ရှည်ရှည် ထူထူထဲထဲလေး မဟုတ်ဘဲ ခပ်ပါးပါးဖြင့် ငုတ်စိလေးဖြစ်နေသည်ကို သတိထားလိုက်မိသည်။ ထို့ကြောင့် စိန်မြင့် လည်းအံ့သြသွားပြီး နှုတ်မှ ဟင် ကနဲထွက်သွားစဉ် သူမကလည်းတစ်စုံတစ်ခု ကို ပြောရန်ပါးစပ်ပြင်လိုက်စဉ်မှာပင် အဟမျ……အဟမျး…… အခြားတစ်ဖက်ခန်း ရှိ အိပ်ခန်းထဲမှ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ချောင်းဟန့်သံကို ကြားရသဖြင့် ဘာမှမပြောတော့ဘဲ အသာငြိမ်နေလိုက်သည်။
သူမ ၏လက်နှစ် ဖက်ကတော့ ဘေးမှနေကာ သူမ၏ကိုယ်ပေါ်သို့မှောက်ကာ နို့စို့ပေးနေသော စိန်မြင့်၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်ထားလေသည်။ အတော်ပင် စိတ်ထလာပြီဖြစ်သော စိန်မြင့် သည် နို့စို့ရင်းမှ သူမ ၏ကိုယ်ဆီသို့ခွတက်လိုက်ရာ သူမကလည်း အလိုက်သင့်ပင် ဒူးထောင်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကားပေးလိုက်သည်။ စိန်မြင့် သည် သူ၏လီးကြီးကိုကိုင်ကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝကိုတေ့စမ်းပြီး ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ဗြစ်…..ဗြစ်……ဗျိ…. ဖြစ်…. ဘွပ်… အိ…အု….အု.. သူမ ၏တစ်ကိုယ်လုံးမှာတုန်ကာတက်သွားလေသည်။ စောက်ခေါင်းထဲသို့ဝင်လာသော လီးကြီးကား အခေါင်းနှင့် မဆန့်ဘဲ ကြပ်သိပ်လွန်းသဖြင့် လွလွမိုး မွာ အတော်ပင်နာသွားလေ သည်။ သို့သော်လည်း တစ်ဖက်ခန်းရှိ ဖခင်တို့ အသံကြားသွားမည်စိုးသဖြင့် အသာအယာ အသံတိုးတိုးဖြင့် အော်သည်းလေသည်။
ထို့ကြောင့် စောက်ပတ်သာယခုထက်ပိုပြီး ပြဲအာသွားသော် နည်းနည်းသက်သာသွားမည်ဟုတွေးကာ သူမ၏ထောင်ထားသော ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန်ကားပြီး သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကို ပေါင်ကြားထဲသို့ထည့်ကာ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဖြဲပေး လေသည်။ လီးကဝင်သွားပြီဆိုသည်နှင့် စိန်မြင့် သည် တစ်ချက်ခြင်းဆောင့်ကာလိုးလေသည်။ စိန်မြင့် မရောက်မီကထဲက စိတ် တွေထနေသော လွလွမိုး ကလည်း အောက်မှနေကာ ကော့ပေးပြီးကောင်းကောင်းအလိုးခံနေသည်။ စိန်မြင့် သည် အရှိန်ရလာပြီ ဖြစ်သဖြင့် တစ်ချက်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ကာပေးနေလေပြီ၊ သူမကလည်း စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကို အသေအချာဖြဲပေးကာ တအင်းအင်း နှင့်ဖြစ်လာနေချေပြီ။ ထိုအခိုက်မှာပင် စောစောကပြတ်သွားသောမီးက ဖြတ်ကနဲပြန်လင်း လာသည်။
ဟင်…… အို……. စိန်မြင့် ကသူမကိုအရင်တွေ့လိုက်ရသည်။ သူလိုးနေသည်မှာ မြတ်နိူး မဟုတ်ဘဲ မြတ်နိူး၏ညီမ အသက်(၁ဂ) နှစ်သာရှိသေးသော လွလွမိုး ဖြစ်နေသည်ကို မီးရောင်အောက်တွင်တွေ့လိုက်ရသည်။ စိန်မြင့် ၏ ဟင် ဆိုသောအသံကြောင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိလိုက်သော လွလွမိုး မှာလည်း သူမကို ယခု အားပါးတရလိုးနေသူသည် ထွန်းဝင်း မဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့သော သုံး ရက်လောက်က သူမ အစ္မ ၏ အိပ်ခန်းထဲမှထွက်လာသော စိန်မြင့် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် အံ့သြသွားမိသည်။ သူတို့နှစ် ယောက်၏အနေအထားကလည်းကြည့်ပါဦး။ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတျလဈစလဈဖွဈကာ အရည်တွေစိုရွှဲနေသော သူမ၏အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးထားသော စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ စိန်မြင့် က သူ၏လီးကြီးကို အဆုံးထိ ထိုးသွင်းထားပြီး တစ် ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အံ့သြစွာဖြင့် မျက်လုံးအပြူးသားနှင့်စိုက်ကြည့်နေသောအဖြစ်။
ဟာ…. မိုးမိုး ပါလား…. သူမ ကေတာ့ဘာမွ ပြန်မပြောပဲ ပြုံးစိစိဖြင့် စိန်မြင့် ကို ကြည့်နေသည်။ ထို့ကြောင့် စိန်မြင့် သည် မလုံမလဲဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပါ မိုးမိုး ရယ်….. အကိုက မမနိူး မြတ္လို့ပါ….. ဒျီလိုလုပျနတော ဘယ်လောက်ကြာပြီ်လဲ မကြာသေးပါဖူး မိုးမိုး ရယ် အယင်(၃)ရက်လောက်တုန်းကပါ ကျွန်မ သိပါတယ်.. ဟင်….. မိုးမိုး ကသိတယ္လား….. အခု မမနိူးက… မမနိူး အခန်းက ဟိုဖက်မှာ…. ကဲပါ ခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူး၊ လုပ္စရာရွိသာတာ လုပ်ပါတော့…. ဟုတ်မှလဲလုပ်ပါ မိုးမိုး ရယ်… မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အရှက်ကိုတောင်မငဲ့ဘဲ ပြောလာပြီဘဲ၊ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး အကိုရယ်.. ဒီလိုဆိုလည်း.. ကဲ….. ကဲ… ဘွပ်…. ပြွတ်…. ပြွတ်…စွပ်….စြိ….. အင်း…အု…ဟား.. စိန်မြင့် သည်အားပါးတရဆောင့်ကာ လိုးလိုက်ရာ လွလွမိုး မှာကော့ကာ တက်သွားလေသည်။ အမေလး….. နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်းပါလား အကိုရယ်….. လှလှမိုး သည်သူမ၏ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းလျက် စိန်မြင့် ၏ရင်အုပ်ကြီးအောက်မှနေကာ ဆီးတွန်းထားမိသည်။ စိန်မြင့် သည် သူမ ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုအသာဖယ်ပြီး မို့မောက်ကာတင်းအိနေသော နို့ နှစ်လုံးအား တစ်လုံးစီစို့ပေးနေရာ သူမ၏ခါးမွာ တဖြည်းဖြည်းကော့တက်လာသည်။ ထိုသို့ကော့လာသောအခါ စိန်မြင့် သည် ခပ်ပြင်းပြင်း (၃)(၄) ချက်လောက်ဆောင့်ချပေးလိုက်ပြန်သည်။
အမေလး…. အကိုရယ်…..ဖြေးဖြေး… လှလှမိုး ၏တစ္ကိုယ္လုံးမွာ ဖြတ်ဖြတ်လူးသွားလေသည်။ စိန်မြင့် သည်ဆက်မဆောင့်တော့ ဘဲ သူမ၏နှုတ်ခမ်းများကိုစုတ်ပေးလိုက်ရာ လွလွမိုး သည်တဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကျသွားလေသည်။ တို့နောက် စိန်မြင့် သည် တဆုံး သွင်းထားသော သူ၏လီးကို လွလွမိုး စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ဖိသိပ်ကာ နှဲ့ပေးလေသည်။ ထို့ပြင် သူမ၏နို့အုံများကို ဖြည်းညင်းစွာ ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်၊ တဖန် နို့သီးခေါင်းများကို လက်မနှင့် လက်ညှိုးကြားတွင် လှိမ့်ကာချေပေးလိုက် လုပ် ပေးလိုက်သောအခါတွင် လွလွမိုး ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုသည် ပွစိပွစိဖြစ်လာပြီး စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ တစ်စုံတစ်ရာ ကလည်း စိန်မြင့် ၏လီးထိပ္ဖ်ားကို ရစ်ပတ်ကာဆွဲညှစ်ထားလေသည်။ အကို…. ဘာလဲ မိုးမိုး… မမ ကိုလုပ်တုန်းက ဒီလိုဘဲလား ဟင်….. ဟုတ်တယ်… အစကေတာ့ ဒီလိုပဲနာတာပေါ့….. နောက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဆောင့်ခိုင်းတော့တာပါပဲ …. ဒါဖြင့် …… ကျွန်မကိုလည်း ….. ဟာ ရှက်စရာကြီး …… အကြောင်းသိသွားပြီဖြစ်သော စိန်မြင့် သည် သူမ၏နို့နှစ်လုံးကိုဆွဲကာ တစ် ချက်ခြင်း မှန်မှန်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
ကောင်းတယ် အကိုရယ် ….. နောက်ဆို ဒီ့ထက်တောင် ကောင်းဦးမယ် ….. စိန်မြင့် သည် ဖြေးဖြေးနှင့် မှန်မှန်သာဆောင့်ပေးနေ သဖြင့် အားမလိုအားမရဖြစ်လာသော လွလွမိုး သည် စိန်မြင့် ၏ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ရင်း မြန်မြန်လေး ဆောင့်ပေးပါ အကိုရယ် ….. ကျွန်မ အထဲတည်းက မနေနိူင်အောင် ယားတက်လာပြီ ….. ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့ မိုးမိုး ရဲ့ အထဲတည်းက အကို့ဟာကိုစုပ်ယူနေ တယ်….. လှလှမိုး ၏စောက်ပတ်မှာ မျှော့ဖြစ်သဖြင့် စိန်မြင့် ၏လီးထိပ္ဖ်ားကို ရစ်ပတ်ပြီး တမြှင်းမြှင်းစုတ်ယူလာရာ စိန်မြင့် သည် ထူးကဲသောအရသာကို ခံစားရလေသည်။ စုပ်မျှော့၏ ဒါဏ္ကို ကြာရှည်မခံနိူင်သော စိန်မြင့် မွာ လွလွမိုး ၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး မနားတမ်းပင်ဆောင့်လေတော့သည်။ မကြာမီ မှာပင် ဟား….. အကို …. အမေလး လေး ….. ဟား…..ဟား ဟား …. ကောင်းလှချည်လား မိုးမိုးရယ်… အကိုမနေနိူင်တော့ဘူး… ဟင်း ဟင်း ဟင်း ….. ဟူသော အသံတို့နှင့် ပထမ မိုးမိုး က စိန်မြင့် ၏ကိုယ်လုံးကြီးကိုကြုံးကာဖက်လိုက်ပြီး စိန်မြင့်ကလည်း
သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုပြန်လည်ကြုံးဖက်ကာ နှစ်ဦးစလုံး တွန့်ကာလိမ်ကာ နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ဖြင့် ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ တက် လှမ်းပြီး သားအိမ်ဝထိအောင်ပန်းထုတ်လိုက်သော စိန်မြင့် ၏သုတ်ရည်များကို လွလွမိုး ကစုပ်ယူနေလေတော့သည်။ စိန်မြင့် နှင့် ချိန်းထားသော မြတ်နိူး သည် ကုတင်ပေါ်တွင်တစ်စောင်းလေးလှဲကာ စောင့်မျှော်ကြိုလင့်နေရင်း သွေးသားများ ထကြွနေလေ သည်။ ပြီးတော့ မီးကလည်းပျက်နေသဖြင့် တစ်ယောက်ထဲ ကုတင်ပေါ်တွင် စိတ်ကူးနေရင်း စိတ်များထကြွသည်ထက် ထကြွလာ သဖြင့် သူမ၏အဝတ်အစားများကို ချွတ်ကာ စောင်ပါးလေးတစ်ထည်ကို သူမ၏ကိုယ်ပေါ်လွှားလိုက်သည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါချေ သူမ၏ကုတင်ဘေးသို့ လူတစ်ယောက် ရောက်လာသည်ကိုသိလိုက်ရသည်။ ထိုသူသည် အမှောင်ထဲတွင် သူမ၏ကိုယ်လေး ကိုစမ်းသည်။ မွတျနျိူး ကလည်းငြိမ်နေသည်။
သူမ၏ကိုယ်ပေါ်တွင် အဝတ်အစားမရှိဘဲ စောင်ပါးလေးတစ်ထည်သာ လွှမ်းခြုံထားသည်ကို သိရသဖြင့် ထိုသူကလည်း သူ၏အဝတ်အစားတွေကို ကုတင်ဘေးတွင်ရပ်လျက်ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ကုတင်ဆီသို့ ဒူးထောက်ကာတက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ စောင်ပါးလေးကို ဆွဲခွါပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ကာ မျက်နှာအနှံ့နမ်းသည်။ နှုတ်ခမ်းဖျားလေးကို အသာစုပ်ကာနမ်းသည်။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ခဏမွ် စုပ်နမ်းပေးပြီးတော့ သူမ၏နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူ၏ပါးစပ်ဖြင့် အားပါးတရစုပ်ပေးလေသည်။ သူ၏လက်ကလည်းအငြိမ်မနေပါ၊ မြတ်နိူး ၏စောက်ဖုတ်လေးကိုအသာအုပ်ကိုင် ကာ အကွဲအကြောင်းတစ်လျောက် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ စောက်ပတ် တွင် စောက်ရည်ကြည်များမှာ ရွှဲနစ်ကာနေလေပြီ။ ပြီး တော့သူက မြတ်နိူး ၏ပေါင်နှစ်လုံးကို ဒူးကွေးကာထောင်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကားကာ ပေါင်ကြားထဲတွင် ဝငျထိုငျလိုကျ သညျ။ ထို့နောက် သူ့မျက်နှာက မြတ်နိူး ၏စောက်ပတ်ဆီသို့မှောက်ချလိုက်သည်။
မြတ်နိူး သည် သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သူ့ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ကာ တစ်ခုခုပြောတော့မည့်အချိန်တွင် အဟမ်း…. အဟမ်း ….. အခြားတစ်ဖက်ခမ်းမှ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ချောင်းဟန့်သံကိုကြားလိုက်ရသဖြင့် ဘာမှမပြောတော့ပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက္ကာ မာန်တင်း လိုက်လေသည်။ ထိုသူ၏မျက်နှာကတော့ မြတ်နိူး ၏အဖုတ်ပေါ်မှောက်ကျသွားရုံမကာ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကိုပင် သူ၏လျှာဖြင့် ထိုးယက်ကာနေလေပြီ။ အိ… အို… အွန်း …. မြတ်နိူး မှာခါးလေးကော့တက်လာလိုက် ဖင်ကြီးတွေ မွှေ့ယာပေါ်မှ ကြွတက်လာလိုက်ဖြင့် တစ္ကိုယ္လုံးတဆတ္ဆတ္တုန္ကာ နေလေသည်။ သူမ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မြတ်နိူး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကိုဖြဲ ကာ သူ၏လွ်ာကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ထိုးထည့်ကာ အဆက်မပြတ်ယက်ပေးနေသည်။ အား … အမလေး … အို… ရှီး ရှီး …. မြတ် နိူး ၏တစ္ကိုယ္လုံး သွက်သွက်ခါရင်း နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို မစေ့နိူင်တော့ဘဲ သည်းတွားလိုက်ရှာသည်။ မြတ်နိူး သည် သူ့လျှာဒဏ်ကို မည်သို့မျှဆက်ပြီး မခံနိူင်တော့။ အထဲတည်းတွင် ယားကာတက်လာလိုက်သည်မှာလည်း မပြောပါနှင့်တော့။
တော်ပြီ …. မယက်နဲ့တော့ …. ဟို ကုန်းပေးမယ် …. လိုးပါတော့ …. မြတ်နိူး သည်အသံကို အုပ္ကာ မသဲမကြဲ တီးတိုးလေးပြောလိုက် လေသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သော ၃ရက်လောက်က စိန်မြင့် အား မြတ်နိူး ကနောက်တစ်ခါဆိုလျှင် ဖင်ကုန်းပြီးခံမည်ဟု ကတိ ပေးခဲ့သည်။ ယခုလည်း စောက်ပတ်ကို လျှာဖြင့် အကလိခံရသည့်ဒဏ်ကို မခံနိူင်တော့ သည်ကတစ်ကြာင်း၊ နှာလည်းအလွန်ထ ကာ ခံချင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်း မြတ်နိူး က ဖင်ကုန်းပေးမည်ဟုဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြတ်နိူး ထိုသို့ပြောပြီးသည့်အချိန် မတော့ ထိုသူသည်သူ၏ မျက်နှာကို စောက်ပတ် ဆီမှခွါလိုက်ပြီး ထထိုင်လိုက်လေသည်။ မြတ်နိူး သည်အမောပင်ဖြေမနေတော့ပဲ ချက်ခြင်းလူးလဲထကာ အိပ်ယာပေါ်တွင်လေးဖက်ထောက်ပေးလိုက်သည်။ သူက တော့ မြတ်နိူး ၏နောက်တွင် ဒူးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်ပြီး လုံးတစ်နေသော မြတ်နိူး ၏ဖင်ကြီးတွေကို လက်ဖြင့်စမ်းပြီး ငုံ့ကာနမ်းလိုက်သောအခါ မြတ်နိူး ခါးသည် ခွက်သွား ပြီး တင်သားများမှာလည်းခါယမ်းသွားလေသည်။
ပြီးတော့ နောက်သို့စူထွက်နေသော မြတ်နိူး ၏စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလက်ဖြင့်စမ်း ကာ သူ၏လီးတံကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့ပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လျောတိုက်ပြီး သူ၏လဒစ်ဖြင့်ပွတ် ပေးလိုက်သောအခါ မြတ်နိူး ၏ဖင်ကြီးများသည် တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် ယမ်းကာနေလေသည်။ ပြီးတော့လည်း သူ၏ထိပ်ဖြင့် မြတ်နိူး ၏စောက်စေ့လေးကို ဖိဖိထိုးပေးနေလေသည်။ အစကတည်းက အတော်ခံချင်နေပြီဖြစ်သော မြတ်နိူး မွာ စောက်ရည်ကြည်များ သူမ၏ပေါင်ဆီသို့ စီးကျလာသောအခါတွင် ဆက်လက်သည်းမခံနိူင်တော့သဖြင့် လုပ် ….. လုပ်..တော့လေ ….. လိုးတော့ ….. ဟင့် အသံအုပ်အုပ်ဖြင့် မသဲမကြဲ ဗလုံးဗထွေးပြောလိုက်လေသည်။ ဒီတော့မှ သူ၏လီးချောင်းကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင်ပြန်တေ့ ပြီး သူမ၏ခါးကိုလက်ဖြင့်စုံကိုင်ကာ လိုးသွင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ၏လက်နှစ်ဖက်က မြတ်နိူး ၏ခါးကို သေချာစွာဆုပ်ကိုင် ပြီး အားပါးတရဆောင့်လိုးလေတော့သည်။
ပလွတ်… ဘွတ် … ပြွတ် … စွပ် …. အ .. အင့် .. အ .. အို .. အရှိန်ကောင်နေတုန်းရှိချိန်မှာပင် ပြတ်သွားသောမီးကပြန်လာသဖြင့် မီးချောင်းလည်းပြန်လင်းလာသည်။ ဟင် .. မျမတ္နိူး .. အို .. ကိုထွန်းဝင်း လား .. မြတ်နိူး ကား လေးဖက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေး ထားသဖြင့် လိုးနေသူ၏မျက်နှာကို မမြင်ရ၊ သို့သော် သည်အသံကိုတော့ ကျက်မိနေသည်။ သူမ ကိုလိုးနေသူသည် စိန်မြင့် မဟုတ်ပဲ သူမ ညီမ၏ ရည်းစားဖြစ်သူ ထွန်းဝင်း ဖြစ်နေကြာင်းသိလိုက်ရသောအခါ မြတ်နိူး မှာထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားလေသည်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူမ၏ အခေါင်းတွင်းသို့ သွင်းထားသော လီးတန်ကြီးပြန်နှုတ်သွားမှာကိုလည်း မလိုလားပါ။ ထို့ကြောင့် ကဲပါလေ .. အခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူး .. လုပ္စရာ ရွိသာတာ လုပ်ပါတော့ .. ကိုထွန်းဝင်း ရယ် .. ထွန်းဝင်း သည် လွလွမိုး နှင့်ကြိုက်နေ သော်လည်း မြတ်နိူး ကို ခိုးခိုးကြည့်ကာ စိတ်ဖြင့်ပစ်မှားလာခဲ့သည်မှာ အတော်ပင်ကြာလှပြီ။ ယခု သူစိတ်ကူးထဲတွင်သာ လိုးနေရ သော မြတ်နိူး ကတကယ့်အပြင်တွင် လိုးပေးရန်ပြောလာသောအခါ ထွန်းဝင်း သည် စိတ်ကိုလွှတ်လျက် အားပါးတရပင်ဆောင့်လိုး လေတော့သည်။
ဘွတ် .. ဗြွတ် .. စြိ စြိ .. အို .. အား ဟား .. ကောင်းလိုက်တာ .. ကိုထွန်းဝင်း .. ဆောင့် ဆောင့် နာနာဆောင့် ….. အ အ အား ………….. မြတ်နိုးနှင့် လှလှမိုးတို့ ညီအစ်မနှစ်ဦးကား ချစ်သူချင်းလဲလှယ်ကာ ခံစားလေ့ရှိကြသော ” ဘုံအချစ် ” ၏ အရသာကိုမ မျှော်လင့်ပဲ ခံစားမိကြလေတော့သတည်း။ …..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆရာမလေး မွတျနိုး